မိုးမှာ သည်းကြီးမဲကြီး ရွာသွန်းနေလျှက် လေများကလည်း အ
ဆက်မပြတ်တိုက်ခတ်နေသောကြောင့် လေသံနှင်မိုးသံ တို့မှာရော
နှောနေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှာ ညနေစောင်းမိုးချုပ်လုစ အချိန် ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်းကလည်းမှောင်မည်းစပြု နေပြီမိုးကလည်း
တိတ်မည့်ပုံမပေါ်ပေ။ သည့်အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်မှာ နားခိုရ
မည်နည်း။ ကျွန်တော့်တွင် တစ်ကိုယ်လုံးကို လုံစေတဲ့ မိုးကအကျီင်္
ရှည်ကြီးတစ်ထည်မှလွဲ၍ ဘာမှမပါပေ။ လမ်းမှာလည်း တောလမ်း
လေးဖြစ်သည့် အလျှောက် ရွှံ့ဗွက်များမှာထူထပ်နေပေသည်။ ဒီ့အပြင် မိုးချုပ်နေတဲ့ လောကကြီးကို ကျွန်တော်အဘယ်သို့မျှ ပုံကန်ရ
မည်နည်း.. မိုးအတွက် အကာအကွယ်ယူရပေဦးမယ်။
တခြားမစဉ်းစားတော့ပဲ ကျွန်တော်၏မျက်စိများက နားခိုရန်နေရာ
ကောင်းကောင်းရဖို့ ဆော့ကစားရှာဖွေနေခဲ့ ပါသည်.။ မကြာမီ မှောင်လုနေသော ပတ်ဝန်းကျင် ထဲမှ မထင်ရှားသည့် ၀ိုးတိုးဝါးတား
အရာဝတ္ထု တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက် ရတယ်။ ထိုအရာသည်သက်မဲ့ ဖြစ်ဟန်တူသည်။ ကျွန်တော်၏ခြေလှမ်းများကို ခပ်မြန်မြန်လျှောက်ကာ `ဒါဟာငါ့အတွက် တည်းခိုစရာနေရာဖြစ်ကောင်း
ဖြစ်နိုင်တယ် ´ ဟုစိတ်ကရေ၇ွှတ်ရင်း မထင်မရှားမြင်နေရသော
အရာဝတ္ထုဆီကို ဦးတည်ခဲ့ ပါသည်။ အနားရောက်မှ တဲလေး
တစ်လုံးဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရသည်။ ကျွန်တော် အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာသွားခဲ့တယ်။
အဆိုပါတဲလေး၏ အမိုးမှာကောင်းမွန်၍ တဲအတွင်း၌ ခြောက်သွေ့
နေမည်ဟု တဲ လေး၏အသွင်အပြင်ကိုကြည့် ၍ကျွန်တော်ယူဆ မိ
လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တဲမှာလူနေဟန်ရှိမည်မတူ ။တံခါးမှာ သော့မ
ရှိပေမယ့်ဂျလက် ထိုးထားလေသည်။ မိုးမှာလည်းပို၍ပင် သည်း
လာသည်ဟုထင်ရပေသည်။ ထိုတဲအတွင်းမှာတစ်ညတာ တည်းခို
ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်မိသည်။ ကျွန်တော်တွေဝေမနေတော့ပဲ တံခါး
ဂျလက်ကို ဖွင့်ကာတဲ ထဲသို့ဝင်ခဲတယ်။
တဲအတွင်းမှာ မှောင်ပြီးထိုင်းမှိုင်းနေသည်ကိုတွေ့ရပေသည်။ အသင့်
့ပါလာသောမီးခြစ်ကို တစ်ချက်ခြစ်လိုက်ရာ တဲအတွင်းသို့ဝင်ရောက်သည့် မည်းနက်သောလမ်းကို မီးရောင်ဖြင့်မြင်တွေ့လိုက်ရပေသည်။ ခုလိုစိတ်ပျက်ဖွယ်ရာညမျိုး လူသူမရှိတဲ့ အရပ်တွင် ရှိသည်
့လမ်းကလေးမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဖြတ်သွားမည်ကို အနည်း
ငယ်သာစိုးရိမ်ဖွယ်ရှိသော်လည်း တဲတံခါးဝကို လုံခြုံမှုရှိအောင် ဂရုတစိုက်ပိတ်လိုက်လေ၏။ ကျွန်တော်မီးခြစ်တစ်ချက်ထပ်ခြစ်ပြီး
ထိုအခန်းငယ်တွင်လေကောင်းလေသန့်ရသောကြောင့် နေသာထိုင်သာရှိသွားခဲ့ တယ်။ ထို့ပြင်သံချေးတက်နေသော
မီးဖိုတစ်လုံးကို တွေ့ရှိရလေသည်။ ကျွန်တော်၏အတွင်းတွင်ခံ
၀တ်ထားသော အကျီင်္မှ အပိုင်း တစ်ချို့ကို ပါလာသောဓားဖြင့် ဖြတ်ယူပြီး မီးမွှေးလိုက်ရာ မကြာမီအချိန်အတွင် မီးလင်းလာခဲ့သည်။
မီးဖို၏အနောက်ဖက်တွင် သစ်သားများပုံထားတာကြောင့် မီးမွှေးရန်
ကျွန်တော့်အတွက် အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟု ထင်သည်.။ ကျွန်တော်
့၏ ဘွတ်ဖိနပ်ကု ချွတ်ကာ ခြောက်သွားစေရန် မီးဖိုဘေးတွင်ထောင်ထား လိုက်တယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်သောကြောင့်
ကျွန်တော့် ၏ခန္ဒာကိုယ်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့လှဲချလိုက်ပါသည်။
ခဏတာမှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွားပေမယ်.. နိူးလာတဲ့ အခါ မီးဖိုမှမီး
များက ၀င်းလက်စွာတောက်လောင်နေသောကြောင့် ကျွန်တော်ကြာရှည်စွာ အိပ်မရပေ။
ထိုအပြင် ကျွန်တော်၏ ခန္ဒာကိုယ်ထုံထိုင်းကိုက်ခဲမှုကတစ်ကြောင်း ၊
ကြမ်းပေါ်တွင်လှဲ၍ အိပ်ရသဖြင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏သွား လာ
လှုပ်ရှားသံများကို ကြားနေရသဖြင့် ကြာကြာမအိပ်နိူင်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ တဖက်သို့ ကိုယ်ကို လှည့်ပြီး အိပ်မည်ပြုရာ အခန်းဆီသို့
့လာသည့် ခြေသံကိုကြားနေရသောကြောင့် ကျွန်တော်ထိတ်လန့်
သွားခဲ့ တယ်။ ပြတင်းပေါက်များက်ုပျဉ်ပြားနှင့် အသေပိတ်ထား
သည့်အပြင် အ၀င်တံခါးကိုလည်းကျွန်တော် သေချာပိတ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်၍ တဲအတွင်းသို့ ၀င်ရန်အပေါက်မရှိပေ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်
်အတော်အတန်ကြောက်လန့် သွားသော်လည်း ထ၍ရင်ဆိုင်ရ
သည်မှ တစ်ပါး အခြားမရှိပါတော့ချေ။ ထိုဝင်လာသောလူစိမ်းသည်
သွက်လက်ခြင်းမရှိ ၊မီးတောက်နေသောမီးဖို ဆီသို့တဖြေးဖြေး
သူသည်အခန်းထောင့်တစ်နေရာတွင်ရှိသော ကျွန်တော့်ကို သတိပြုမိဟန် မတူချေ။ ထိုလူမှာမီးဖို့ရှိရာသို့ တည့်မတ်စွာ လျှောက်သွား
ရင်း သူ၏စွတ်စိုနေသော လက်အစုံကု်ိ မီးကင်နေလေသည်။ ထို
လူကိုကျွန်တော် မျက်ချေမပြတ် သေသေချာချာ ကြည့်ပြီး အကဲခတ်နေမိသည်။ ထိုလူမှာခုလိုညမျိုးတွင် လူသားတစ်ယောက်ကြုံတွေ့ရသည့် စိုစွတ်မှုထက်ပင် ပို၍ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး စိုစွတ် လျှက်ရှိသည်ကို တွေရပေသည်။ အ၀တ်အစားများက ဟောင်းနွမ်း စုတ်ပြတ်နေပြီး သူ့ခန္ဒာကိုယ်ပေါ်မှ ရေများဟာ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ စီးကျ
လျှက်ရှိပေသည်။ ဦးထုပ်လည်းဆောင်းထားခြင်းမရှိပေ။ သူ့မျက်လုံးများအထက်ရှိ ထောင်နေသော ဆံပင်များမှ ရေစက်တို့က
မီးကျီခဲ များ အပေါ်သို့စီးကျနေသောကြောင့် တစ် ရှဲ..ရှဲ မြည်နေပေသည်။
ထိုလူကိုကျွန်တော် မြင်လိုက်သည်နှင် တစ်ပြိုင်နက် ဥပဒေဘောင်အတွင်း မှလူမဟုတ်ဟု ယူဆမိလိုက်သော်လည်း လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်မည်ဟု တဖန်တွေးယူမိလိုပြန်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကပဲ သူ့ကို စတင်နူတ်ဆက်လိုက်လေရာ မကြာမီ ရင်းနှီးသွားကြပါသည်။ ကျွန်တော်က စကားစမိလိုက်သည်..။
`ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေအတွက် တော့ သာယာတဲ့ မိုးလေ၀သ
ဆိုတာ ဘယ်မှာရှိနိူင်မှာလဲ မိတ်ဆွေရာ ။ ဒါပေမယ့် ဒီတဲကလေးက
ခြောက်ခြောက်သွေ့သွေ့ ရှိနေလို့ တော်သေးတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာ´
တဲအပြင်ဖက်တွင် ရှိနေသော သေလုမျောပါး နေကြာပင်များနှင့်
အတိုင်းအဆမရှိ သန်စွမ်းနေကြသော ပေါင်းပင်ကြီးများသည် မိုး
`တစ်ချိန်က ဒီတဲလေးဟာ သိပ်သန့်ရှင်းမှု မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် သာမာန် ဧည့်
ရိပ်သာလေ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုတော့နေတဲ့ အမြဲနေတဲ့သူ မရှိ
သို့သော် သ**********များနေထိုင်သည့် နေရာတို့
တွင် တွေ့ရတတ်သော ဘူးခွံ၊ပုလင်းခွံ စသည်တို့ကို ဤတဲ အတွင်းတွင် လုံးဝမတွေ့ရပေ။
`ဒါနဲ့ … အဲ့ဒါတွေကို ဘာလို့မတွေ့တာလဲ…´
သူပြောခဲ့သလို သန့်ရှင်းမှုမရှိခဲ့ဘူး ဆိုရင် အခု ဘာကြောင့် အဲ့ အရာများ မတွေ့ရသနည်း။ ကျွန်တော်မေးခွန်း ထုတ်နေမိသည်။ ထိုလူက အဖြေစကား
မဆိုမီ မသက်သာသောဟန်ဖြင့် သက်ပြင်းကို လေးလေးပင်ပင်
်မယုံနိူင်သော အကြည့်နှင့် မျက်မှောင်ကြုတ်ပြီး သူ့ကိုကြည့်မိလိုက်သည်။
`အဲ့ဒီသရဲက အလွန်အစွမ်းထက်တာ၊ သူ့ဇာတ်လမ်း
အကျဉ်းကတော့ သူဟာ ဒီတဲအနောက်မှ ရှိတဲ့ ရေတွင်း ပျက်ထဲကို
ကိုယ်တိုင် ဆင်းသေလိုက်တာပဲ ..´
ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စား သွားပြီးသူ့အနားကို တိုးသွားမိတယ်။
`တွေ့တဲ့ လူတွေက ဆွဲတင်လိုက်တော့ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး ရွှံ့တွေပေပြီးသေနေတယ်။ အဲ့ဒီ့သရဲက ဒီ
တဲပေါ်ကို တက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုပ်နေတယ် ။ တစ်ခါ တခါ ဒီ
တဲထဲကို မိုးဝင်ခိုတဲ့ လူတွေဆိုရင် သူ့ခြေသံကြောင့် အိပ်ရေးပျက်ကြရတယ်..။ ´
ပြောရင်း ထိုလူစိမ်းက ထပ်ပြီး သက်ပြင်းချလိုက်ပြန်သည်။ ကျွန်တော်က-
`ဒါပေမယ်.. ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ ဒီသရဲကခြောက်မှာ တော့ မ
`ဟုတ်ကဲ့ ….ကျွန်တော်တို့ကိုသူက ခြောက်မယ်မထင်ပါဘူး´ သူ့
စကားအဆုံးတွင် ကျွန်တော်က ရယ်လိုက်ပြီး ….
.ဟားး… ဘယ်သူတွေဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော်ကတော့ သရဲဆိုတာကို တစ်ခါမှမမြင်ဖူးပါဘူး´
ထိုလူစိမ်းက စိတ်ပျက်သည့်အသွင်ဖြင့် ကျွန်တော်ကို စူးစိုက်ကြည့်လေသည်။ ပြီးတော့.သူက……
` ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျားဘယ်တော့မှမြင်ဘူးမှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒါပေ့မယ့်
…ဒီတဲမှာ ၀င်တည်းကြတဲ့ သူတွေအားလုံး သရဲမခြောက်ခံရတာမ
ရှိဘူး ။ အကုန်လုံးခြောက်ခံ ရတာကြီး ပဲ´
ထိုသူမည်သို့ပင်ပြောနေပါစေ ကျွန်တော်က မယုံကြည်ပါ။
`ကျွန်တော့်ကို အိပ်ရေးပျက်အောင်လုပ်နေတာ သရဲမဟုတ်ဘူး..။
မိတ်ဆွေ တဲပေါ်တက်လာလို့ ကျွန်တော်နိူးသွားတာ.. ´
ထိုအခါ ထိုသူက ကျွန်တော့်ကို လှောင်ပြောင်သလို ရယ်နေလေ
သူ၏ကိုယ်မှစီးကျနေသော ရေထို့က အဆက်မပြတ် ကြမ်းပေါ်သို့ စီးကျ နေပေသည်။
သူ့ကိုယ်မှလည်း အနံ့ဆိုးများ ထွက်ပေါ်၍ လာလေပေသည်။
`ဘု ရားရေ….မိတ်ဆွေ ….အနေနဲ့ ဘယ်တော့မှ မခြောက်နိူင်တော့ဘူးလား…´ ဟု ကျွန်တော် ပြောလိုက်မိသည် ။
ထိုလူက အနည်းငယ်ရယ်လိုက်ပြီး ………
`မခြောက်တော့ဘူးတဲ့ လား …ဟ…ဟ….ဟ ကျွန်တော်က ဘယ်
တော့မှခြောက်မှာ မဟုတ်ဘူး ၊ ကျွန်တော်တို့လို လူတွေဟာ မိုးလေ၀သ ကောင်းကောင်း ၊ ဆိုးဆိုး နွေဖြစ်ဖြစ်၊ဆောင်းဖြစ်ဖြစ် ဘယ်တော့မှ ခြောက်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး.. ဒီမှာကြည့်လေဗျာ´
ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် သူ၏ရွံများပေနေသော လက်အစုံကို မီးထဲသို့ ထိုးသွင်းပြီးကျွန်တော့်ကို စူးစိုက်ကြညိ့နေလေသည်။ ကျွန်တော် အခုမှ
သူပြောသမျှတွေသတိရ သွားပြီး ကျွန်တော့် ဘွတ်ဖိနပ်ကိုကောက်ယူကာ ကြောက်လန့်တကြားအော် ဟစ်ကာ မိုးသက်လေပြင်းကျနေသော ညအမှောင်ထဲသို့ ထွက်ပြေးခဲ့မိပါတော့သည်။
( ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံး ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ၊ နောက်ထပ် ဆက်ပြီး အားပေးကြပါဦး ခင်ဗျာ )
Credit by Ko Ye' Tayza Kyaw
ADMIN =) Htut Htet
မြန်မာနိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များသို့ ပြည်ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားရာ တွင် တင်းကျပ်သော အခြေအနေ နှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း နိုင်ငံ တကာ ပြည်ဝင်ခွင့် စစ်တမ်းတစ် စောင်၌ ဖော်ပြသည်။
နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သော Henley & Part-ners က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံအသီးသီး၏ ပြည်ဝင်ခွင့် တင်းကျပ်မှု ညွှန်းကိန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ နိုင်ငံကူးလက် မှတ်မှာ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ဝင်ရောက်ရာတွင် ဝင်ခွင့်ရရှိရန် ခက်ခဲနေခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၂၁၉ နိုင်ငံ၏ ပြည်ဝင်ခွင့်တင်းကျပ်မှုညွှန်းကိန်းကို အခြေခံ၍ အမှတ်ပေးထားသော စစ်တမ်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံက အင်ဂိုလာ၊ အီရန်တို့နှင့်အတူ အဆင့်(၈၆)တွင် ရပ်တည်နေခြင်းဖြစ်ပြီး အီရတ်က အဆင့်(၉၂) နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်က အဆင့် (၉၃)ဖြင့် နောက်ဆုံးနေရာတွင် ရပ်တည်နေကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူများသည် နိုင်ငံခြား ပြည်ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားရာ၌ အခက်အခဲများရှိနေပြီး အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ရာတွင် ပိုမိုတင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
‘‘နိုင်ငံကြီးတွေကို သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဗီဇာဝင်တဲ့အခါ အခက်အခဲရှိတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံကလူတွေ သူတို့နိုင်ငံမှာ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင် အခြေချမယ်လို့ ထင်နေတယ်။ ပညာတတ်ဆိုရင် သူတို့က ပိုရစ်တယ်’’ဟု ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ခရီးသွားလာနေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
နိုင်ငံခြားသံရုံးများတွင် ပြည်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားရာ၌ အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ်၊ အလုပ်ခေါ်စာ၊ ဖိတ်ခေါ်စာနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားများ တင်ပြရန် စည်းမျဉ်းများကို သံရုံးအများစုက သတ်မှတ်ထားသည်။
‘‘အမေရိကန်ဗီဇာလျှောက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဗီဇာရဖို့ မလွယ်ဘူး။ ယူကေတို့၊ သြစတြေးလျတို့ကတော့ မိဘရဲ့ဝင်ငွေက ဘယ်ကဝင်လည်းဆိုတဲ့အချက်နဲ့ ဘဏ်စာရင်းကို သေချာပြနိုင်ရင် ဘာကြောင့် အဲဒီနိုင်ငံကိုသွားမှာလဲဆိုတဲ့ အကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံမှုကို ပြနိုင်ရင် ဗီဇာရတယ်။ စင်ကာပူကတော့ အဲဒီနိုင်ငံတွေလောက် မဆိုးဘူး။ အဓိကကတော့ ကျောင်းသားရဲ့မိဘက ကျောင်းသားကို စင်ကာပူမှာ ကျောင်းထားနိုင်မယ့် လုံလောက်တဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ ဘဏ်စုငွေရှိဖို့ပဲ’’ဟု နိုင်ငံတကာပညာရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်ကို အခြေခံ၍ Henley & Partners က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပြည်ဝင်ခွင့်တင်းကျပ်မှု ညွှန်းကိန်းတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံက အဆင့်(၆)နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံက အဆင့်(၉)တွင် ရပ်တည်နေပြီး ဖင်လန်၊ ဆွီဒင်နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံ သားများသည် ကမ္ဘာ့တစ်လွှား ခရီးသွားလာမှုအတွက် အကောင်းဆုံး နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူများအဖြစ် အဆင့် (၁)တွင် ရပ်တည်နေသည်။
ဒေါ်လာ တစ်သောင်းကျော် အပိုကြေး ပေးရတဲ့ လုပ်ငန်းတချို့လည်း ရှိနေ
မြန်မာ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ခြစားမှု ပမာဏ စိုးရိမ်စရာ ကောင်းကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက အင်္ဂ࿿ါနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ စစ်တမ်း တစ်ခုမှာ ရေးသား ထားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ၊ OECD အဖွဲ့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနဲ့ စက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းတို့ ပူးတွဲ လေ့လာခဲ့တဲ့ စစ်တမ်း အရ မြန်မာ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေရဲ့ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်း အထိဟာ ပါမစ် လိုင်စင်တွေ ရဖို့ လာဘ်ထိုး ရကြောင်း ရေးသား ထားပါတယ်။
လုပ်ငန်း ထက်ဝက်လောက်က အမေရိကန် ဒေါ်လာ ငါးရာ လောက်ထိ အပို ပေးဆောင်ရတယ်လို့ သိရပြီး ဒေါ်လာ တစ်သောင်းကျော် အပိုကြေး ပေးရတဲ့ လုပ်ငန်း တချို့လည်း ရှိနေပါတယ်။
ကျွမ်းကျင် လုပ်သား ရှားပါးမှုနဲ့ နည်းပညာ အခက်အခဲ တွေကလည်း မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် နောက်ထပ် စိန်ခေါ်မှုတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
တရုတ်ပြည်ကို လူကုန်ကူးခံရပြီး၊ မေလ ၂ ရက်မနက်က သူတို့ အလုပ် လုပ်ရတဲ့ ကျန်းရှီး ပြည်နယ် ကျီယန်းမြို့ IAG Sound Box စက်ရုံ ကနေပြန်လာတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို့အနောက် တောင်ဘက် ငရုပ်ကောင်းမြို့ နယ်ခွဲ ဘုရားချောင်းရွာက ရွာသား ၁၅ ယောက် ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ မူဆယ်မြို့ ဘက်ကို မနေ့ က မေလ ၆ ရက်ည မှာ ပြန်ရောက်လာပြီလို့ စုံစမ်း သိရှိရပါတယ်။
"သူက တရုတ်ငွေ ၁၅၆ဝ ကိုသူကစိုက်ပေးလိုက်တယ်၊သဘောကတော့ ကျနော်တို့ ၁၆ ယောက်ကို လိုက်ပြီးကယ်ထားလိုက်တာပေါ့ အဲ့ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့ကို ပိုက်ဆံလာပို့ပေးမဲ့ ဇော်မင်းထိုက်ကို ကိုကံနိုင်က ရွှေလီထဲ ကိုရောက်ပြီးရှာနေပြီ အဲ့ဒီမှာနေ့လည် ၁ နာရီဝန်းကျင်လောက်ရှိလိမ့်မယ် ကိုဇော်မင်းထိုက်နဲ့ အဆက်အသွယ်ပြန်ရတယ်ဖုန်းနဲ့ အဲ့ဒါနဲ့ ကျနော်တို့ကို ကယ်ထားတဲ့သူတွေကို ကျနော်တို့ ပြန်ပြီးတော့ငွေသွားပြန်ပို့တာပေါ့ မူဆယ်မှာညအိပ်နေတာပေါ့"
သူတို့ ၁၅ ယောက်ကို တရွာတည်းနေထိုင်တဲ့ ဒေါ်ဝင်းကြည်ဆိုသူက တရုတ်ပြည်မှာ လစာကောင်း တဲ့ အလုပ်အကိုင်ရမယ်လို့ ပြောဆို စည်းရုံးပြီးတဲ့နောက် တဦးကိုကျပ်ငွေ တသိန်းခွဲဆီအကျိုးဆောင်ခ ယူပြီး ဖေဖေါ်ဝါရီလက ပို့ လိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့တရုတ်ပြည်က IAG Sound Box စက်ရုံမှာ လုပ်ခ နည်းနည်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့အကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် လစာကိုလဲပုံမှန်ရှင်းမပေးတဲ့အတွက် အခက်အခဲ တွေဖြစ် ပြီး နောက်ဆုံးမှာ သူတို့ လုပ်အားခတွေအကုန်မရပဲ မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာ ကြတဲ့အကြောင်း RFA ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
သွန်းမဒီ၊ ရန်ကုန်၊ မေ-၆
ရန်ကုန်၊ ပုဂံ၊ ကျိုက်ထီးရိုး၊ ငွေဆောင်၊ မြ၀တီနှင့် မော်လမြိုင်ဒေသ များသို့ ပုဂ္ဂလိက ရဟတ်ယာဉ် ပြေးဆွဲနိုင်ရန်စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ရဟတ်ယာဉ် ပျံသန်းနိုင်ရေး ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ပုဂ္ဂလိကရဟတ်ယာဉ် ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း အဖြစ်Global Integrated ServiceLtdမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
'ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး ပုဂ္ဂလိက ရဟတ်ယာဉ် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင် နိုင်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ပြေးဆွဲခွင့်ကို မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီကို တင်ပြထားပါတယ်။ ရဟတ်ယာဉ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီးလို့ ခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရဟတ်ယာဉ် လေးစင်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းစတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရဟတ်ယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုကို ရန်ကုန်နဲ့ပုဂံမှာ စတင်လုပ်ဆောင်မှာ ပါ'ဟုGlobal Integrated Service Ltd မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ သည်။
ရဟတ်ယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက မြန်မာနိုင်ငံသို့
လာရောက်လည်ပတ်သည့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လှည့်လည်ရာတွင်
ကြုံတွေ့နေရသည့် ပြည်တွင်းလေကြောင်း ခရီးစဉ်များ အဆင်မပြေမှုများရှိပါက ရွေးချယ်သွားလာ
ထို့ပြင် ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း၊ လူနာတင်ခြင်း၊ ကယ်ဆယ် ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း
'လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလာတဲ့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေ ခရီးစဉ်ရေးဆွဲသွားလာရာမှာ
အဓိကကြုံရတဲ့ အခက်အခဲက ပြည်တွင်းလေကြောင်း ခရီးစဉ်တွေရဲ့ အချိန်အပြောင်းအလဲ၊ အကြောင်း
အမျိုးမျိုးကြောင့် ခရီးစဉ်ပျက်တာတွေ စတဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိပါတယ်။ အခု ရဟတ်ယာဉ် ၀န်ဆောင်မှု
လုပ်ငန်းရှိလာရင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ လိုရာခရီးဆက်နိုင်ဖို့ ရွေးချယ်စရာ ရှိလာမှာဖြစ်လို့ ကြိုဆိုပါတယ်'ဟု ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
သုတ်ကောင် မထုတ်နိုင်တဲ့ ယောင်္ကျားများအတွက် မျှော်လင့်ချက်
မျိုးရိုဗီဇချို့ယွင်းမှုကြောင့် မျိုးမအောင်နိုင်တဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ အရေပြားကနေ ကနဦးဆင့် သုတ်ကောင် ဆဲလ်တွေကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သန္ဓေတည်ဖို့ သဘာဝ သုတ်ကောင် လုံလုံလောက်လောက် မထုတ်နိုင်တဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ အရေပြားကနေ ဖန်တီးရယူခဲ့တာပါ။
သုတ်ကောင် မထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ အမျိုးသားတွေအတွက် ဒီနည်းပညာနဲ့ နောင်အနာဂတ်မှာ မျှော်လင့်ချက်တွေ သယ်ဆောင်လာပေးနိုင်မယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ယုံကြည်ထားပါတယ်။
သုတ်ကောင် ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ အမျိုးသား သန္ဓေမအောင်မှု ကုထုံးများ အတွက် လေ့လာရာမှာ သုတေသီတွေအတွက် ကိရိယာသစ် တစ်ရပ်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ‘ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရလဒ်တွေဟာ သုတ်ကောင်ဆဲလ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို လေ့လာဖို့ စမ်းသပ်မော်ဒယ် စရလိုက်တာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဆေးရုံမှာ ဆဲလ်အခြေပြု ကုထုံးတွေ လုပ်ဖို့ အသုံးချမှုနိုင်မှုတွေအတွက် အလားအလာ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ အရေအတွက်များများနဲ့ အရည်အသွေးကောင်းကောင်း ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ပေါ့။ သုတ်ကောင်ထုတ်လုပ်ရာမှာ ပြဿနာရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ ဝှေးစေ့အတွင်းကို ဆဲလ်ရိုးတံက ရလာတဲ့ မျိုးစေ့ဆဲလ်တွေ တိုက်ရိုက် အစားထိုးနိုင်ဖို့ အလားအလာ ရှိပါတယ်။” လို့ Standford တက္ကသိုလ်က ဦးဆောင်သုတေသီ ဒေါက်တာ Reijo Pera ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။
စစ်တွေလေဆိပ်တွင် ခရီးသည် တစ်ဦး သင်္ကာမကင်း၍ ထိန်းသိမ်းခံရ
(နိရဉ္စရာ- ၇ မေလ ၂၀၁၄)
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေလေဆိပ်တွင် ခရီးသည် တစ်ဦး သင်္ကာမကင်း ဖြစ်ခံရရာမှ စစ်တပ်က စစ်ဆေးရန် ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ယင်းခရီးသည်မှာ စစ်တွေမြို့မှ မောင်သန်းမောင်ဆိုသူ ဖြစ်ကြောင်း မျက်မြင် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မောင်သန်းမောင်သည် အဲယားမန္တလေးဖြင့် ရန်ကုန်ကို လိုက်ပါရန် Boarding pass ဖြတ်ပြီး လေယာဉ်အား ခရီးသည်များနားနေဆောင်မှ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက် အိမ်သာထဲသို့ ၀င်ကာ အကျီင်္လဲကြောင်း၊ သူ့အမည်အား ဦးသန်းမောင်ဟု ခေါ်ဆောင်ကြောင်း၊ သူ့နာမည်မှာ မောင်သန်းမောင်ဖြစ်သဖြင့် ဦးသန်းမောင်မှာ သူ့နာမည်ဟု မထင်သဖြင့် နေမြဲတိုင်းနေကြောင်း၊ ယင်းနောက်ပိုင်းတွင် ခရီးသည်နားနေဆောင်တွင် အိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လေယာဉ်ပေါ်တွင် ခရီးသည်များတက်ရောက်ပြီးနောက် ခရီးသည် တစ်ဦး မပြည့်သဖြင့် လေယာဉ်တာဝန်ရှိသူများမှ လိုက်ရှာရာ မတွေ့သဖြင့် လေယာဉ်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိနေသော ခရီးသည်များကို လေယာဉ်ပေါ်မှ လေဆိပ်နားနေဆောင်သို့ ပြန်ချပြီး လိုက်ရှာသော်လည်း မတွေ့ကြောင်း၊ နောက်ဆုံးတွင် မောင်သန်းမောင်အား အိပ်နေသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် သူ့အား နိုးပြီး မေးမြန်းရာ အဲယား မန္တလေးနှင့် ရန်ကုန်သို့ သွားမည့်သူ ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် လေယာဉ်ကွင်း လုံခြုံရေး ယူထားသော စစ်တပ်မှ သင်္ကာမကင်း ဖြစ်သဖြင့် စစ်ဆေးမေးမြန်းရန် မောင်သန်းမောင်အား ခေါ်ယူသွားသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ခိုးမှုကျူးလွန်သူများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ရာမှ နေအိမ် ပြူတင်းပေါက်များကိုဖွင့်ကာ အတွင်းမှပစ္စည်းများကို ၀ါးလုံးတုတ်ဖြင့် ချိတ်ဆွဲ၍ခိုးယူခဲ့သည့်အမှုများ ထပ်မံပေါ်ပေါက်
၁၉.၃.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၂၁၃၀ အချိန် ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်နေ မဖြူဖြူအောင်သည် မိသားစုနှင့်အတူအိပ်ယာဝင်ခဲ့ပြီး ၂၀.၃.၂၀၁၄
ရက်နေ့ ၀၄၀၀အချိန် အိပ်ယာမှနှိုးစဉ် အိပ်ခန်းတံခါးဘောင်တွင် ချိတ်ထားသော လက်ကိုင်အိတ်မှာပွင့်နေပြီး ပြူတင်းပေါက်တံခါးမှာ
လည်း အနည်းငယ်ပွင့်နေသည်ကို တွေ့ရ၍ စစ်ဆေးကြည့်ရာ
ရွှေဆွဲကြိုး(၁)ကုံး၊ ရွှေလက်ကောက်(၂)ကွင်း၊ ရွှေလက်စွပ်(၁)ကွင်း၊
ရွှေဟန်းချိန်း(၂)ခု၊ ရွှေနားကပ်(၁)ရံ၊ ကျောက်စိမ်း(၃)လုံး၊ ရွှေဖြတ်စ
(၁)ခု၊ လက်ပတ်နာရီ(၁)လုံးနှင့် လက်ကိုင်ဖုန်း(၁)လုံး၊ စုစုပေါင်း
တန်ဖိုး ငွေကျပ်(၁၈၉၀၈၀၀)ခန့်မှာ ပျောက်ဆုံးနေသည်ကို
တွေ့ရှိရသဖြင့် အရေးယူးပေးရန်တိုင်တန်းချက်အရ ဒဂုံမြို့သစ်
(ဆိပ်ကမ်း)မြို့မရဲစခန်း(ပ)၁၄၅/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၈၀ ဖြင့်အမှုဖွင့်
အမှုမှပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်း
ဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊အကူတပ်ဖွဲ့ခွဲ၊ အုပ်ချုပ်မှုတပ်ခွဲ၊ မှုခင်းအကူ
ဌာနစုမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များက စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ ခိုးမှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီး လွတ်မြောက်လာသူဇော်လတ်၊ (၄၁)နှစ်၊ (ဘ)ဦးသန်းမောင်၊ (၁၀၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်နေသူမှာ အမှုမှပါဆုံး
သွားသည့် ရွှေထည်ပစ္စည်းများကိုဝတ်ဆင်၍ လက်ကိုင်ဖုန်းကို
အသုံးပြုနေကြောင်း စုံစမ်းအတည်ပြုရရှိသဖြင့် ၁၉.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၈၀၀အချိန်တွင် ၎င်း၏နေအိမ်သို့ ၀င်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့ပါသည်။
၎င်းအား စစ်ဆေးခဲ့ရာ ၂၀.၃.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၂၀၀ အချိန်ခန့်တွင် တစ်ရပ်ကွက်တည်းနေ ရွှေအိုးစည်နှင့်အတူ အခင်းဖြစ်နေအိမ်
ပေါ်ပေါက်ခဲ့သဖြင့် အမှုမှပါဆုံးသွားသည့် သက်သေခံငွေ၊ ဖုန်းနှင့်
ရွှေထည်ပစ္စည်း၊ တန်ဖိုးငွေကျပ်(၁၈၉၀၈၀၀)ကို ပြန်လည်
ဆက်လက်၍ ၎င်းအား အခြားခိုးမှုများကျူးလွန်ထားခြင်းရှိ/မရှိ
စစ်ဆေးခဲ့ရာ ၎င်းနှင့် ရွှေအိုးစည်းတို့(၂)ဦးသည် ယင်းနေ့ညပိုင်းတွင် အဆိုပါအမှုအားမကျူးလွန်မီအချိန်က ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်၊ A-3 လမ်းအတွင်းရှိ မြေညီထပ်တိုက်ခန်း
(၁)ခန်း၏ပြူတင်းပေါက်မှ လက်နှိုက်ကာ မှန်တင်ခုံတွင်တင်ထား
သော SAMSUNGအမျိုးအစား လက်ကိုင်ဖုန်း(၁)လုံးနှင့်
ငွေကျပ်(၁၂၀၀၀)တို့ကိုခိုးယူခဲ့ကြကြောင်း ပေါ်ပေါက်သဖြင့် ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့မရဲစခန်း(ပ)၁၄၈/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှု
ပုဒ်မ-၃၈၀/၅၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး သက်သေခံ
အမှုများတွင် အတူပါဝင်ကျူးလွန်သူ ရွှေအိုးစည်(ခ)ထွန်းဇော်၊
(၂၃)နှစ်၊ (ဘ)ဦးမြင့်သိန်း၊ (၁၀၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)
မြို့နယ်နေသူကို ဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၁.၄.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၁၃၃၀ အချိန်တွင် ၎င်း၏နေအိမ်မှ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသူ ရွှေအိုးစည်(ခ)ထွန်းဇော်နှင့် ဇော်လတ်တို့(၂)ဦးအား အခြားခိုးမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ၎င်းတို့(၂)ဦး
သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွင်းက ညပိုင်းအချိန်များတွင် ဒဂုံ
မြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ စစ်တောင်းအိမ်ရာရှိ မြေညီထပ်တိုက်ခန်း
တစ်ခန်း၏ပြူတင်းပေါက်အားဖွင့်ကာ အတွင်းရှိ မောင်နှံခုနှစ်ဖော်
ရွှေလက်စွပ်(၁)တွဲနှင့် လက်စွပ်(၁)ကွင်းတို့အား ၀ါးလုံးတုတ်ဖြင့် အပြင်မှချိတ်ဆွဲခိုးယူခဲ့ကြောင်း၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်၊ (၃)လမ်း၊ (စီ)ဘလောက်ရှိ မြေညီထပ်
တိုက်ခန်းတစ်ခန်း၏ပြူတင်းပေါက်အားဖွင့်ကာ အတွင်းရှိ လက်ပတ်
နာရီ(၁)လုံးအား ၀ါးလုံးတုတ်ဖြင့် အပြင်မှချိတ်ဆွဲခိုးယူခဲ့ကြောင်း၊
ဧပြီလအတွင်းက ညအချိန်များတွင် ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်အိမ်ရာရှိ မြေညီထပ်တိုက်ခန်းတစ်ခန်း၏
ပြူတင်းပေါက်အားဖွင့်ကာ အတွင်းရှိSAMSUNG အမျိုးအစား
လက်ကိုင်ဖုန်း(၁)လုံးကို လက်ဖြင့်အပြင်မှနှိုက်၍ခိုးယူခဲ့ကြောင်း၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ စစ်တောင်းအိမ်ရာရှိ မြေညီထပ်
တိုက်ခန်းတစ်ခန်း၏ ပြူတင်းပေါက်အားဖွင့်ကာ အတွင်းရှိရွှေဆွဲကြိုး
(၁)ကုံးအား ၀ါးလုံးတုတ်ဖြင့် အပြင်မှချိတ်ဆွဲခိုးယူခဲ့ကြောင်းနှင့် ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်အိမ်ရာအတွင်း
ရှိ မြေညီထပ်တိုက်ခန်းတစ်ခန်း၏ပြူ တင်းပေါက်အားဖွင့်ကာ
အတွင်းရှိ LENOVO အမျိုးအစားလက်ကိုင်ဖုန်း(၁)လုံးကို လက်ဖြင့် အပြင်မှနှိုက်၍ခိုးယူခဲ့ကြကြောင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သဖြင့် ဒဂုံမြို့သစ်
(ဆိပ်ကမ်း)မြို့မရဲစခန်း(ပ)၁၆၅/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ -၃၈၀/၅၄
ဖြင့်အမှုဖွင့်လှစ်ကာ သက်သေခံပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းပြီး ၎င်းတို့
(၂)ဦးကို ထပ်မံအရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိ
မိန်းကလေးတွေကို ရောင်းစားမယ်လို့ ဘိုကိုဟာရမ် ခေါင်းဆောင်က ခြိမ်းခြောက်
နိုင်ဂျီးရီးယား မှာ ဘိုကိုဟာရမ် စစ်သွေးကြွတွေ ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ ကျောင်းသူ ၂ ရာကျော် ပြန်လွတ်လာဖို့ သတင်းပေးနိုင်သူကို ရဲက ဒေါ်လာ သုံးသိန်းကျော် ဆုငွေ ပေးမယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အရင်လက ဖမ်းသွားတဲ့ ဒီမိန်းကလေးတွေကို ကယ်တင်နိုင်ရေး အတွက် သေချာ တိကျအောင် ညွှန်ပြ သတင်းပေး နိုင်သူ ဘယ်သူ မဆိုကို ဆုငွေပေးမယ်လို့ အဘူဂျာ မြို့တော် ရဲရုံးချုပ်က ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။
တနင်္ဂနွေ နေ့ကလည်း ဒေသတွင်း တခြား ရွာတွေကနေ နောက်ထပ် မိန်းကလေး ၁ဝ ယောက်ကို သေနတ်သမား တွေက ဖမ်းဆီး သွားခဲ့ပါတယ်။
အောင်မြင်မှုများ မကြာမီ ပြန်လည် ပိုင်ဆိုင်လာမည်ဟု ယူနိုက်တက် ပရိသတ်များအား ဂစ်ကတိပြု
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်၏ ခမ်းနားသော အချိန် ကာလများကို ပြန်လည် ပိုင်ဆိုင်လာစေမည်ဟု အသင်း၏ ယာယီမန်နေဂျာ ရိုင်ယန်ဂစ်က ပရိသတ်များအား ကတိပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေးဗစ်မိုယက်စ် ထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက် ကစားသမား/မန်နေဂျာအဖြစ် အသင်းကို ထိန်းကျောင်း ကိုင်တွယ်ပေးနေသည့် ဝါရင့် ကစားသမားကြီးသည် ၎င်း၏ ဘောလုံးသမားဘဝ နှုတ်ဆက်ပွဲစဉ်ကို ယမန်နေ့ညက အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ် ပရိသတ် ရှေ့မှောက်တွင် ပါဝင်ကစားသွားခဲ့သည်။ ၎င်းပွဲထုတ်ခဲ့သည့် လူငယ်ကစားသမားလေး အချို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းများဖြင့် ဟူးလ်စီးတီးကို (၃-၁)ဖြင့် အနိုင်ရသည့် ပွဲစဉ်အပြီး၌ အသက်(၄၀)အရွယ် ဝေလသားကြီးက “ကျွန်တော် ပြောချင်တာက အသင်းကို ဆက်ပြီးတော့ အားပေးနေကြဖို့ ဆိုတာပါပဲ။ အနာဂတ်ကို ခင်ဗျားတို့ ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်း မြင်ပြီးကြပြီ ဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လူငယ်တွေကို အမြဲတမ်း အခွင့်အရေးပေးလေ့ရှိပြီး ဆွဲဆောင်မှု ပြည့်ဝတဲ့ ကစားဟန်ကို ဖော်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပရိသတ်များအား ပြောဆိုခဲ့သည်။
၎င်းက “မကြာခင်မှာပဲ ကောင်းမွန်ခမ်းနားတဲ့ အချိန်တွေ ပြန်ရလာပါလိမ့်မယ်။ လောလောဆယ် အခြေအနေတွေက ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလွန်းတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ထောက်ခံ အားပေးမှုတွေကို ပြောင်းလဲ မပစ်လိုက်ပါနဲ့။ လာမယ့်နှစ်ပိုင်းတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ခင်ဗျားတို့ဆီကို ပိုပြီး အားကောင်းတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ဆောင်ယူလာပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟုလည်း ကတိပြုသွားခဲ့သည်။ ၎င်းက အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြခဲ့သည့် လူငယ်ကစားသမားလေးများ ဖြစ်ကြသော တွမ်လောရင့်စ်နှင့် ဂျိမ်းစ်ဝီလ်ဆင် တို့၏ ပွဲဦးထွက် လှပမှုကိုလည်း ချီးကျူးသွားခဲ့သေးသည်။
“ချာတိတ်တွေ ကွင်းထဲမှာ အကောင်းဆုံး လုပ်ပြခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော်အရမ်းကို ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ ဝီလ်ဆင်က ကစားသမားကောင်း တစ်ယောက်ပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကစားသမားမျိုးပေါ့။ သူဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အတူဆင်းဖြစ်ကတည်းက မျက်ကွယ်ပြုလို့ မရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်လာတယ်။ ဒီချာတိတ်နှစ်ယောက်လုံး သူတို့အသက် (၈)နှစ်ကတည်းက အသင်းကို ရောက်နေခဲ့တာပါ။ သူတို့တွေ ခြေစွမ်းပြနေတာကို မြင်ရတာ ပျော်စရာပါပဲ”ဟုလည်း ဂစ်က မှတ်ချက်ပြုသွားခဲ့သည်။
အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခံရပြီးနောက် ကြိမ်ဒဏ်ပေးခံရဖွယ်ရှိသည့် အင်ဒိုအမျိုးသမီး
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတွင် အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ခံရသည့် အမျိုးသမီး တစ်ဦးအား လူမှုရေး ဖောက်ပြန်မှု စွဲချက်ဖြင့် ကြိမ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ခံရမည့် အရေးနှင့် ကြုံနေကြောင်း သိရှိရသည်။ အသက်(၂၅)နှစ်အရွယ် မုဆိုးမ တစ်ဦးသည် အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသား တစ်ဦးနှင့် ဆက်နွယ်မှု ရှိနေသည်။ သူမသည် အသက်(၄၀)အရွယ်ရှိပြီး ကလေး(၅)ဦး၏ ဖခင်နှင့်အတူ အာချေးရှိ နေအိမ်တွင် ရှိနေစဉ် စေတနာ့ဝန်ထမ်း စုဖွဲ့ထားသည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အဖွဲ့တစ်ခုက အတင်းဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် အမျိုးသားကို ကြိုးတုပ်ပြီး ရိုက်နှက် ကန်ကျောက်ခဲ့ကြသည်။
အမျိုးသမီးမှာမူ ပြစ်ဒဏ်ပေးသည်ဆိုသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ခံရပြီးနောက် ဒေသတွင်းရှိ ဘာသာရေး ရဲဌာနသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ အာချေးသည် အင်ဒိုနီးရှားတွင် အစ္စလာမ်မစ် ရှာရီရာ ဥပဒေကို ကျင့်သုံးသည့် တစ်ခုတည်းသော ပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး၏ နေအိမ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသူများတွင် အရွယ်ရောက်ပြီး အမျိုးသား (၇)ဦးနှင့် အသက်(၁၃)နှစ်အရွယ် ယောက်ျားလေး တစ်ဦးတို့ ပါဝင်သည်။ ယင်းအဖွဲ့သည် အမျိုးသမီးကို ဝိုင်းဝန်း မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့သော်လည်း အဓိက တိုင်ကြားသည့် ကိစ္စမှာ အမျိုးသမီး၏ လူမှုရေး ဖောက်ပြန်မှုသာ ဖြစ်နေကြောင်းလည်း သိရသည်။
“အဲဒီအတွဲကို ကျွန်တော်တို့ ကြိမ်ဒဏ်ပေးစေချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ဘာသာရေး သတ်မှတ်ချက်တွေကို ဖီဆန်ဖောက်ပြန်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု ရှိခဲ့တယ်လေ”ဟု အာချေးပြည်နယ်၊ လန်ဆာမြို့ရှိ ဘာသာရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲ အီဘရာဟင်မ် လာတစ်ဖ်က ဂျကာတာတိုင်းမ် သတင်းစာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းကပင် ယခုဖမ်းဆီးထားသည့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့သည် ယခင်က အကြိမ်အချို့ အတူနေခဲ့ဖူးသည်ဟု ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းလည်း ဆိုသည်။ အမျိုးသမီး အနေဖြင့် အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ခံရသည့်တိုင် ယင်းအခြေအနေသည် သူမ၏ လူမှုရေး ဖောက်ပြန်မှုအတွက် ပြစ်ဒဏ်ကို သက်သာလျော့ပါးစေမည် မဟုတ်ဟုလည်း သိရသည်။ ရှာရီရာ ဥပဒေအရ အဆိုပါစုံတွဲသည် လူအများရှေ့တွင် ကြိမ်ဒဏ်(၉)ချက်စီ ရိုက်နှက်ခံရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုအတောအတွင်း ဒေသဆိုင်ရာ အကြီးမားဆုံး အစ္စလာမ်မစ် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် နာဟ်လာတူလ် အူလာမာ၏ အကြီးအကဲ တူနော်ကူ ဖိုင်ဆယ်လ် အလီက ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသူများကိုလည်း စွဲချက်တင် အပြစ်ပေးသင့်ကြောင်း ဝေဖန်ခဲ့သည်။
အူလာမာက ထိုသူများသည် အစ္စလာမ်မစ် ဥပဒေကို မိမိတို့စိတ်ကြိုက် ပုံစံဖြင့် ပြုမူပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။ “ဒီလူရမ်းကားတွေကိုလည်း အပြစ်ပေးသင့်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အမျိုးသမီးကို မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပြစ်ဒဏ်က ပိုပြီးတော့ ကြီးလေးသင့်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ အာချေးမှာ ရှာရီရာ ဥပဒေ ကျင့်သုံးနေတာကို ရုပ်သိမ်းရစေမယ့် လှုံ့ဆော်မှုမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်လို့ပဲ”ဟု အူလာမာက ဝေဖန်ခဲ့သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့သည် လူ(၂)ဦးနှင့် ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တို့ကို ဖမ်းဆီးထားပြီး ကျန်(၅)ဦးကိုလည်း လာရောက်အဖမ်းခံရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရေး သောင်မတင်ရေမကျ ဖြစ်နေဦးမယ် – ဦးဇင်လင်း
ထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးက ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ယင်းလပ်ကို အာဏာအလွဲသုံးမှုနဲ့ ရာထူးက ဆင်းပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် ထိုင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာ သောင်မတင်ရေမကျ ဖြစ်နေဦးမယ်လို့ မြန်မာ့သတင်းသမဂ္ဂ အတိုင်ပင်ခံ အယ်ဒီတာ ဦးဇင်လင်းက သုံးသပ်ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
ထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးအဖွဲ့ဝင် တရားသူကြီး အားလုံးက ကန့်ကွက်သူမရှိဘဲ အပြစ်ရှိကြောင်း တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာမို့ ဥပဒေကြောင်းအရ မှန်တယ်လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သူက ပြောပါတယ်။ ဦးဇင်လင်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မစ္စယင်လတ် နေရာမှာ ယာယီ အိမ်စောင့်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် Niwatthamrong Bungsongphaisan ဒီကနေ့မှာ ခန့်အပ်
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မစ္စယင်လတ် နေရာမှာ ယာယီ အိမ်စောင့်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် Niwatthamrong Bungsongphaisan ဒီကနေ့မှာ ခန့်အပ်လုိုက်ပါတယ်။
အာဏအလွဲသုံးစားမှု စွဲချပ်နဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေခုရုံးက ကြားနာ စစ်ဆေးပြီး မစ္စ ယင်လတ် အပါအ၀င် ၀န်ကြီး ၉ ဦးကုို ထုတ်ပယ်ဖုို့ ဆုံးဖြတ်လုိုက်တာပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေခုရုံး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ယင်လတ်ဟာ နုိုင်ငံရေး လုပ်ပုိုင်ခွင့် ၅ နှစ် ပိတ်ပင် ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်လတ် ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ မစ္စတာ Thawil ကုိုလည်း မူလူ ရာထူးဖြစ်တဲ့ ထုိုင်းအမျိုးသား လုံခြုံရေးဌာန အကြီးအကဲ တာဝန်ကုို ပြန်လည် ပေးအပ်လုိုက်ပါတယ်။
ယင်လတ်ကတော့ သူ့အစုိုးရက တုိုင်းပြည်ကုို ရုိုးရုိုးဖြောင့်ဖြောင့်ပဲ အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လုို့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။ ယင်လတ် အစုိုးရကုို ဆန့်ကျင် ဆန္ဒုပြတဲ့ သူတွေကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံ ခုံရုံးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကုို ကြိုဆုိုလုိုက်ပါတယ်။
Photo Ref: Bangkok Post
ဗြိတိန်ဖျော်ဖြေပွဲတွင် အငြင်းပွားစရာ အခြေအနေများ ဖန်တီးခဲ့သည့် မိုင်လီ
ယခုနှစ် သူမ၏ ကမ္ဘာလှည့် ဖျော်ဖြေပွဲ အစီအစဉ်အတွက် ဗြိတိန်မြေသို့ ဆိုက်ရောက်လာပြီး ပထမဆုံး ဖျော်ဖြေသည့် အစီအစဉ်တွင်ပင် မိုင်လီဆိုင်းရပ်စ် အနေဖြင့် အငြင်းပွားဖွယ် အခြေအနေများကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံနှင့် အပြုအမူပိုင်းများအတွက် ဝေဖန်မှုများ ကြုံနေရသည့် အမေရိကန် Popဂီတစတား အဆိုတော်သည် လန်ဒန်မြို့၊ O2အားကစားကွင်းကြီးတွင် ပြုလုပ်သော ဖျော်ဖြေပွဲ၌ ဒေါ်လာငွေများကို သီ၍ချုပ်ထားသည့် ဖက်ရှင်မျိုး ဝတ်စုံအပြင် မျက်စိအမြင် ရှုပ်ထွေးစရာ အဝတ်အစား အမျိုးမျိုးကို လဲလှယ်ဝတ်ဆင်သွားသည်။
ထို့အပြင် သီဆိုဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် အတောအတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်သည့် ပွင့်လင်းဆိုးရွားသော အမူအယာမျိုး (၁၀)ကြိမ်ထက်မနည်း လုပ်ပြသွားခဲ့သည်။ အဆိုးဆုံးမှာ လိင်တူချင်း ချစ်ကြိုက်ရန် မိန့်ခွန်းသဘောမျိုး တိုက်တွန်းပြောဆိုသွားပြီး ပရိသတ်များကို ဆေးသုံးသည့် အလေ့အကျင့် ပြုလုပ်ရန်ပါ စည်းရုံးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ “ရေသောက်တယ်။ ပြီးတော့ ပရိသက်ကို လှည့်ထွေးလိုက်သေးတယ်”ဟု မျက်မြင်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
အခြားပရိသတ် တစ်ဦးက “သူက ပရိသတ်တွေကြားမှာ လိင်တူချစ်ကြိုက်တဲ့သူတွေ ပါလာရင် အချင်းချင်း ဖက်နမ်းလိုက်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ပုံတွေကို ကင်မရာချိန်ပြီး Screenအကြီးကြီးပေါ်မှာ ပြပေးမယ်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲ ရှိတဲ့အတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လုပ်ပြလိုက်ပါလို့ အော်နေခဲ့တယ်”ဟုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မိုင်လီသည် ပရိသတ်များ အနေဖြင့် အရက်များများသောက်ပြီး ဆေးပြားများများသုံးရန် မျှော်လင့်ပါသည်ဟု အော်ဟစ်သွားသေးကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
သံဝေဂရစဖွယ် မယားကိုစွဲလန်း၍ ပြိတ္တာဘ၀ရောက်သွားရှာသူတစ်ယောက်အကြောင်း
(ကိုစည်သူထွန်း Group ထဲမှာ share ထားပေးတဲ့ သံဝေဂ ရစရာ ဇာတ်လမ်းလေးပါ…)
လွန်ခဲ့သော အနှစ်သုံးဆယ်ကျော်ကာလက ဦးချမ်းသာ၊ ဒေါ်ခင်မီတို့ဟာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်လေးမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစု အဖြစ်သူတို့ ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းကကော ရပ်ကွက်သူ၊ရပ်ကွက်သားတွေကပါ ချစ်ခင်ကြတဲ့ လေးစားကြတဲ့ မိသားစုလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးချမ်းသာတို့မှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးလေး နဲ့ အချမ်းသာကြီးမဟုတ်တောင် မကြောင့်မကျ မတောင့်မတ ဘ၀မျိုးနဲ့နေနိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့မှာ သားသမီးသုံးယောက် နဲ့ ဘ၀ကိုစိုးရိမ်ကြောင့်ကျစရာမလိုပဲ ပျော်ပျော်ကြီးဖြတ်သန်းခဲ့ကြတာပါ။
ဦးချမ်းသာက လည်း နံမည်နဲ့လိုက်အောင် အလှုအတန်း၊အပေးအကမ်းရက်ရော တတ်တာကြောင့်ခြွေရံသင်းပင်းလည်း အလွန်များလှပါတယ်။ လစဉ် သီတင်းသီလစောင့်တည်ခြင်း အပြင် အခါအခွင့် သင့်တိုင်းလင်မယားနှစ်ယောက် ၀ိပသနာတရားစခန်းတွေကို လည်းမကြာခဏ အလျှင်းသင့်သလို ၀င်ပြီး တရားအားထုတ်ကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခန္တာကိုယ်ကြီးနဲ့ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ လူပီပီ ရောဂါဝေဒနာကိုလည်း ခံစားကြရတာ ဓမ္မတာမို့ အသက်ငါး ဆယ်ကျော်ကျော်အရွယ်လေးနဲ့ နားမကျန်းဖြစ်ပြီးဦးချမ်းသာ သေဆုံးသွားခဲ့ရရှာပါတယ်။
ဦးချမ်းသာ သေဆုံးပြီးနောက် လေး၊ငါးရက်လောက်အကြာမှာ မိမိယောက်ျား ဦးချမ်းသာ မကျွတ်မလွတ်ပဲ ပြိတ္တာဘ၀ကို ရောက်ရှိနေပြီး အိမ်မှာသာတွယ်ကပ်နေတယ်ဆိုတာကို ဒေါ်ခင်မီ ခံစားသိရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ညဘက်အိပ်ရင်မိမိအနား တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိနေသလိုခံစားချက် များအပြင် ဦးချမ်းသာ အသက်ရှိစဉ်က သုံးစွဲခဲ့တဲ့ရေ မွေးနံ့ကို ရရနေတတ်ပါတယ်။ ရက်လည်တရားနာရင် ကျွတ်မှာပါလေဆိုပြီး ဒေါ်ခင်မီတွေးခဲ့ပေမဲ့ ရက်လည်တရားရားနာပြီး မိမိခင်ပွန်းဦးချမ်းသာကို အထူးနံမည်ဖိတ်ခေါ် တရားနာ၊ ရေစက်ချ အမျှဝေခဲ့ပေမဲ့ ဦးချမ်းသာရဲ့ အရိပ်အရောင်တွေဟာ ဆက်ပြီး ရှိနေ ဆဲပါပဲ။ ဒါနဲ့ တစ်လပြည့်တော့ တစ်ခါ ဦးချမ်းသာအတွက်ရည်စူးပြီး တရားနာ၊ ရေစက်ချပြီး အမျှဝေပြန်ပါတယ် ။ ဒီတစ်ခါလည်း ထူးမခြားနားပါပဲတဲ့။ ဒါနဲ့ မိမိချစ်လင်အတွက် ဘ၀ကူးကောင်းစေချင်သော စေတနာနဲ့ ဒေါ်ခင်မီအားမလျှော့ပဲ နှစ်လပြည့်မှာမှာလည်း ဘုရားသားတော် သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကို ပင့်ဖိတ်ပြီး တရားနာ ၊ ရေစက်ချ အမျှဝေပြန်ပါတယ်။ ကျန်ကြားရက်တွေမှာလည်း မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနံနက် အာရုံဆွမ်းကပ်တိုင်း ဦးချမ်းသာအတွက် ရည်စူးပြီးနေ့စဉ် အမျှဝေဆုတောင်း ခဲ့ပေမဲ့ ဦးချမ်းသာကတော့ ဆက်ပြီးရှိနေမြဲရှိနေတုန်းပါပဲတဲ့။ ဦးချမ်းသာဆုံးပြီး သုံးလလောက်မှာတော့ ဒေါ်ခင်မီတစ်ယောက် စိတ်ပြေလက်ပျောက် အဖြစ် ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မြန်မာပြည်တွင်း ဘုရားဖူးဖို့လိုက်လာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်ခင်မီတစ်ယောက်ကတော့ ဘုရားလည်းဖူးရင်း မိမိခင်ပွန်းကိုလည်းထို ဘုရားဖူးရတဲ့ ကုသိုလ်တွေကို ရပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပြီးအမျှဝေနေခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်က မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ မြေလတ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာ ရှိတဲ့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်း ပရိတ်ရွတ်ရင် ရာဝင်အိုးလောက်ရှိတဲ့ နှမ်းဆီတွေနဲ့ စဉ့်အိုးကြီးတွေအတွင်းမှ ဆီများဆူဝေကျလာတယ်ဆိုပြီး နံမည်ကျော်နေခဲ့ပါတယ်။ ထိုဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကလည်းတော်တော်လေးကြော်ကြား နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းရှိဘုရားများကို ဖူးအပြီးအပြန်ထိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်း ၀င်ရောက်ဖူးမျှော်ကြရန် စီစဉ်ခဲ့ကြပြီး အပြန်မှာ ဧရာဝတီမြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအိမ်မှာ ကားကိုခဏအပ်ခဲ့ကြပြီး ဧရာဝတီမြစ်ကိုဇက်နဲ့ ဖြတ်ကာ ကူးလာကြပြီး ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆီကို ၀င်ရောက်ဖူးမျှော်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆရာတော် ဘုရားကြီးဆီဝင်ရောက်ဖူးမျှော်ကြရန် ခွင့်တောင်းကြပြီး ဆရာတော်ဘုရားကြီးသတင်းသုံးရာ ကျောင်းဆောင်အပေါ်ထပ်ကို တက်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့လူအုပ် ၀င်ဝင် လာခြင်း ဆရာတော် ဘုရားကြီးမှ မျက်လွှာကို ပင့်ကြည့်ပြီး “ အော်..အော်…ဒကာကြီးတို့လာတာ…ရှစ်ယောက်တောင်မှကိုး” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်ခင်မီတို့ လည်းဇဝေဇ၀ါဖြစ်သွားကြပြီး မိမိလူတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဒေါ်ခင်မီတို့ ဘုရားဖူးထွက်လာကြတာ ခုနှစ်ယောက်တည်းသာရှိတာပါ။ ဒါနဲ့ ဒေါ်ခင်မိတို့ထဲက အသက်နဲနဲကြီးတဲ့သူတစ်ယောက်က လက်အုပ်ချီပြီး “မှန်လှပါ…တပည့်တော်တို့..ခုနှစ်ယောက်ပါ ဘုရား” လို့ ပြန်လျှောက်တော့ ဆရာတော် ဘုရားကြီးက လှေကားထိပ်က တံခါးနားကို လှမ်းကြည့်ပြီး “ဘုန်းကြီး မြင်တာတော့………နောက်တစ်ယောက် ထပ်ပါလာပါသေးတယ်” လို့ ပြန်မိန့်ပါတယ်။ ဒီတော့မှာ ဒေါ်ခင်မီလည်း သဘောပေါက်သွားပြီး မျက်ရည်သွင်သွင် ကျလာကာ “မှန်လှပါ………..တပည့်တော်မ ယောက်ျားကိုချမ်းသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ဘုရား…တပည့် တော် အမျိုးသားဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလလောက်က ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါ..တပည့်တော် စိတ်ထင် မကျွတ်မလွတ်ပဲ တပည့်တော်နောက်ကို လိုက်လိုက်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ် ဘုရား” ဟု လက်အုပ်ချီကာ လျှောက်ထားပြောဆိုပါတယ်။ ဒီတော့မှ ဘုရားဖူးအဖွဲ့တွေလည်း မျက်စိပြူးကာ တစ်လမ်းလုံးနောက်က မမြင်ရတဲ့ပရ လောကသားလိုက်လာပါလား ဆိုတဲ့အသိနဲ့ ကြောက်လန့်ကုန်ကြပါတယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ဒေါ်ခင်မီကိုကြည့်ပြီး ဆက်မိန့်ပါတယ်။ “မပူပါနဲ့ ဒကာမကြီး..ဒီဒကာကြီးဟာ…ကျွတ်ချိန်တန်လို့ ..ဘုန်းကြီးဆီထိ ရောက် အောင် လိုက်လာနိုင်တာပဲ…ကဲ..ကဲ…ဒကာကြီးကို ဘုန်းကြီးမေးချင်တာရှိတယ်.. တရားလည်း ဟောချင်တယ်…ဒကာမကြီး သဘောတူလား” လို့ ပြန်မေးပါတယ်။ဒီတော့ ဒေါ်ခင်မီလည်း ၀မ်းသာအားရ နဲ့ “သဘောမတူစရာမရှိပါဘူး..ဘုရား” လို့ ပြန်လျှောက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဆရာတော် ဘုရားကြီးက တံခါးဘက်ကို လှမ်းကြည့်ကာ “ကဲ..ဒကာမောင်ချမ်းသာ…မင်းသင့်တော်တဲ့ သူတစ်ယောက်ယောက်ကတစ်ဆင့်.. စကားပြောကြတာပေါ့…မင်းအကြောင်းကို ကျန်တဲ့ သူတွေလည်းသိပြီး သံဝေဂ ယူနိုင် အောင် မင်းသင့်တော်မဲ့ စကားပြောနိုင်မဲ့တစ်ယောက်ယောက်ဆီကနေဆက်သွယ် ပြီး ပြောကြတာပေါ့” လို့ အမိန့်ရှိလိုက်ပြီး…အခန်းတွင်းမှာ ခဏတာမျှငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဆယ်မိနစ်လောက် အချိန်လောက်ကြာမှ ဒေါ်ခင်မီရဲ့ ခန္တာကိုယ်ဟာ လှုတ်ရမ်းပြီး သိသိသာသာ တုန်ယင်လာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့မျက်ရည် ဖြိုင်ဖြိုင်ကျကာ ခေါင်းကြီးကိုအတင်း ငုံ့ပြီးထိုင်နေပါတယ်။ ဒီတော့မှ ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ဦးချမ်းသာဝင်ရောက်ပူးကပ်နေတဲ့ ဒေါ်ခင်မီကို လှမ်းကြည့်ပြီး “ဒကာကြီး…ရဟန်း သံဃာ ကိုတွေ့တာတောင် မရှစ်ခိုးတော့ဘူးလား” လို့ မိန့်တော့မှ ဆရာတော်ကြီးကို လှမ်းကြည့်ပြီး ဦးသုံးကြိမ်ချပြီး ကန်တော့ပါတယ်။ ဆရာတော် ဘုရားကြီးက “ဒီဘ၀မှာတောင် ရဟန်းသံဃာကို ကိုးကွယ်ရမှန်းသိသေးရင် ဒကာကြီးရဲ့အတိတ်ဘ၀ကပါရမီက လည်းနဲမှာမဟုတ်ဘူး…ဘာလို့ နိမ့်ကျတဲ့ ဒီလြိုပိတ္တာ ဘုံမှာရောက်နေရတာလည်း” လို့ ဦးချမ်းသာဝင်ရောက်ပူးကပ်နေတဲ့ ဒေါ်ခင်မီဘက်ကို လှည့်ပြီးမေးပါတယ်။ ဒေါ်ခင်မီက ဘာမှ ပြန်မပြောပဲ ငြိမ်နေပါတယ်။ နောက် ဆရာတော်ဘုရားကြီးက နောက်ထပ်ပြန်ပြီး ထပ်မေးကာမှ “ တပည့်တော်..ရောဂါသည်းတော့ ..အရင်က ကျင့်ခဲ့ဘူးတဲ့ ၀ိပသနာတရားတွေကို ပြန်ဆင်ခြင်ပြီး ခန္တာကိုယ်ကို ထွက်လေ၊ ၀င်လေနဲ့ သတိကပ်နေခဲ့ပါတယ် ဘုရား။ ဒါပေမဲ့ တပည့်တော်ရဲ့ အမျိုးသမီးက တပည့်တော်ရဲ့ လက်ကိုဆုတ်ကိုင်ပြီး အားပေးစကားပြောနေတဲ့ အချိန်မှာတော့ တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ငါတော့ငါ့မိန်းမကို ခွဲခွာရတော့မယ်ဆိုပြီး ၀မ်းနည်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အချိန်အခိုက်လေးမှာပဲ တပည့်တော် သေဆုံးခဲ့ပါတယ် ဇနီးကို စွဲလမ်းစိတ်နဲ့ ဇနီးသည်အနားက မခွာပဲတစ်ကောက်ကောက်လိုက် နေခဲ့ပါတယ် တပည့်တော်ကို အမျှဝေတာလည်း ကြားရပါတယ်..ဒါပေမဲ့..တပည့်တော် သာဓုခေါ် လိုက်ရင် ဇနီးနဲ့ဝေးရမှာ ကြောက်လို့သာဓုမခေါ်ခဲ့တာပါ…ဘုရား” လို့ ပြန်ပြီးလျောက်ပါတယ်။
တစ်နာရီကျော်ကျော်လောက် ဟောပြောတရားပြ ပြီးချိန်မှာတော့ ဦးချမ်းသာက ပြိတ္တာဘ၀ကို စွန့်လွှတ်ပြီး သာဓုခေါ် ပါမည့်အကြောင်း ဇနီးသည်ကိုဆက်ပြီး မခင်တွယ်ပဲ နောက်ကဆက်မလိုက်တော့ပါဘူး ဆိုသည့်အကြောင်း..ကတိပေးကာ ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဦးသုံးကြိမ်ချပြီး ဦးချမ်း သာ၏ ၀ိဥာဉ်စွဲကပ်နေသော ဒေါ်ခင်မီမှာလည်း ထိုင်နေရာမှာ ဘေးကိုတစ်စောင်းလေးဖြည်းညှင်းစွာလဲကျကာ သတိခဏမျှမေ့သွားပါတယ်။ နောက်ဆယ်မိနစ်လောက်အကြာ မှ သတိပြန်လည်လာပါတယ်။ ဒီတော့မှ ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ဒေါ်ခင်မီကို “ဒကာမကြီး…ဒကာမကြီးခင်ပွန်းအတွက် စိတ်မပူတော့နဲ့ ..ဒီနေ့ညနေ မြို့ထဲကိုဆင်းပြီး လှုဖွယ် ပစ္စည်းတွေနဲ့ ထီး၊ သင်္ကန်း၊ ဖိနပ်တွေ သွားဝယ်ပြီး သံဃာတော်တွေကို ဒကာကြီး မောင်ချမ်းသာကို ရည်စူးပြီးလှုလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ နံနက်အာရုံဆွမ်း ယာဂု ကိုလည်း ဒကာကြီး မောင်ချမ်းသာကိုရည်စုးပြီး ဘုရားရှင်နဲ့တစ်ကွ သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကို လှုပေးပါ” လို့ပြန်မိန့်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဒေါ်ခင်မီတို့ လူစုလည်း ကျောင်းကလူတွေခေါ်ပြီး လေးမိုင်လောက် ဝေးတဲ့ မြို့ထဲကို ဆင်းကာ လှုဖွယ်ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ကာ ထိုညက ကျောင်းမှာ ပဲ အိပ်လိုက်ကြပါတယ်။ နောက်နေ့ အာရုံဆွမ်း ယာဂုဆွမ်းကို ဘုရားကိုရည်စူးပြီးကပ်လှုကာ ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ တစ်ကွသံဃာတော် များကိုအာရုံဆွမ်းကပ်လှုပြီး သင်္ကန်း စတဲ့ လှုဖွယ်ပစ္စည်း တွေနဲ့ ကပ်လှုပူဇော်ကာ ဦးချမ်းသာကို နံမည်တပ်၍ အမျှဝေပြီး သာဓု ခေါ်ကြပါတယ်။ ထူးဆန်းစွာပဲ သာဓု သုံးကြိမ်ခေါ်အပြီးမှာတော့ အမည်မဖော်နိုင်တဲ့ အမွှေးနံ့သင်းသင်းလေးက ကျောင်းတိုက်အပေါ်ထပ်တစ်ထပ်လုံးမွှေးနေ ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော် ဘုရားကြီးက “ ဒကာကြီးတော့ ကောင်းရာဘုံဘ၀ ကိုရောက်သွားပါပြီ…ဒကာမကြီး” လို့ အမိန့်ရှိလိုက်ချိန်မှာတော့ ဒေါ်ခင်မီရဲ့ ရင်ထဲမှာ ၀မ်းသာ ၀မ်းနည်းခံစားချက်တွေနဲ့ မျက်ရည်တွေလည်လာပြီး ကိုချမ်းသာရေ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် လို့တိုးတိုးလေးရေ ရွတ်ရင်း…………။ ကဲ….ရွာသူ ရွာသားတွေလည်း အသေမဦးခင် ဥဏ်ဦးကာ ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ မှက်ချက်။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် ဦးချမ်းသာ ပြောသောစကားလုံးအမေးအဖြေ များတွင် အချို့အကြောင်းအရာများသည် ဆန်းကြယ်လွန်းသောကြောင့် မဖော်ပြတော့ ပဲ အကျဉ်းခြုံးကာ အတိုချုပ်ပြီးရေးလိုက်ပါသည်။ c
နိုင်ဂျီးရီးယား ကျောင်းသူ ၂၀၀ ကျော်ကို ကယ်တင်ရန် အမေရိကန်ကူမည်
ကျောင်းသူများကို ကယ်တင်ပေးရန် နိုင်ဂျီးရီးယားတွင် ဆန္ဒပြခဲ့ကြစဉ်
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာ ပြန်ပေးဆွဲခံထားရတဲ့ ကျောင်းသူ ၂၀၀ ကျော်ကို ဘိုကိုဟာရမ် စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ လက်ထဲကနေ ကယ်တင်ဖို့ ဘာမဆို အကူအညီပေးသွားမယ်လို့ အမေရိကန် သမ္မတ ဘာရတ်အိုဘားမားက အန်ဘီစီ သတင်းဌာနနဲ့ မေးမြန်းချက်မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ဂျီးရီးယားသမတ ဂွတ်လခ် ဂျွန်နသန်ကလည်း အမေရိကန်ရဲ့ အကူအညီကို ကမ်းလှမ်းတာကို လက်ခံထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“အခြေအနေဟာ အတော်ဆိုးတယ်၊ ဘိုကိုဟာရမ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဟာ နိုက်ဂျီးရီးယားမှာ အပြစ်မဲ့အရပ်သား ရာပေါင်းများစွာကို သတ်ဖြတ်နေတာ အတော်ကြာနေပြီ။ အမေရိကန်က ဘိုကို ဟာရမ်ကိ်ု ဒေသတွင်း အဆိုးဆုံး အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာ ကြာပြီ။”
နိုင်ဂျီရီးယားနိုင်ငံ ဘော်နို ပြည်နယ်ထဲက ချီဘွခ်ရွာမှာ ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့က အထက်တန်း ကျောင်းသူတွေကို ကားနဲ့ တင်ပြီး ကင်မရွန်းနဲ့ နယ်စပ် တောဘက်ကိ်ု ခေါ်ဆောင်ပြီး ပျောက်ဆုံးနေတာ ဖြစ်တယ်။
ဘိုကိုဟာရမ် ခေါင်းဆောင်က မိန်းကလေးငယ်တွေကိ်ု ကျွန်အဖြစ် ရောင်းစားမယ်လို့ မေ ၅ ရက်နေ့က ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းသူတွေကို အမြန်ဆုံး ကယ်တင်ဖို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာသာမက အမေရိကန်ပြည်ထာင်စု၊ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ၊ နယူးယော့ခ်မြို့မှာလည်း ဆန္ဒပြပွဲတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်စစ်တပ်က စစ်သားတွေ ထောက်လှမ်းရေးတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းရေးမှူးတွေ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ကို စေလွှတ်မယ်လို့ အိမ်ဖြူတော်က မေ ၆ ရက်နေ့မှာ ကြေညာထားပါတယ်။ ယူကေ အစိုးရကလည်း အကူအညီပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။
Finger trap online beauty trend လက်ညှိုးတိုင်း အွန်လိုင်း အလှဗေဒ
• ခုတလောခေတ်စားနေတဲ့သတင်းလေးတခုပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ တရုပ်မလေးတွေက မျက်နှာအလှကို လက်ညှိုးနဲ့ အကဲဖြတ်ကြသတဲ့။
• Finger trap test လက်ညှိုးထောင်ချောက်လို့ခေါ်တယ်။ Beauty and Ugliness Identification Method
ခြင်ဆေးခွေ တစ်ခွေက ဆေးလိပ် အလိပ်တစ်ရာ သောက်သည့် ဆိုးကျိုးနှင့် ညီမျှပါတယ်
ခြင်ဆေးခွေ တစ်ခွေက ဆေးလိပ် အလိပ်တစ်ရာ သောက်တာနှင့် ညီမျှပါတယ်
တကယ်အရေး ကြီးပါတယ်။ သိလည်း သိသင့်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ အဲဒါကတော့ ခြင်ဆေးခွေ တစ်ခွေက ဆေးလိပ် အလိပ်တစ်ရာ သောက်တာနှင့် ညီမျှတယ်ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခြင်ဆေးခွေ အခွေတစ်ရာ၏ အနံ့ကို ခံရသူတွေတိုင်းဟာ ကင်ဆာဖြစ်ဖို့ အတော်လေး အာသန်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ခြင်ဆင်ခွေ အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်နိုင်ရန်
ဗဟုသုတ ရရှိစေရန် ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
အခြားသူများကို Share လုပ်၍ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါနော်။
စကားများရန်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုမကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး အစ်ကိုဖြစ်သူမှ ၀ါးလုံးပိုင်းဖြင့် ရိုက်နှက်ခဲ့၍ ညီဖြစ်သူ သေဆုံး
၆.၅.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၆၄၅ အချိန်ခန့်တွင် ထန်းတပင်မြို့နယ်၊
၀ါးတရာကျေးရွာနေ ဦးကျော်ငွေမှ ၎င်းသည် နေအိမ်တွင်ရှိနေစဉ် တစ်ရွာတည်းနေ သားကြီးဖြစ်သူ စန်းမောင်မှာ ရောက်ရှိလာပြီး
နေအိမ်ပေါ်သို့ နောက်ဖေးပေါက်မှတက်သွားကာ အိမ်ပေါ်တွင်
ထိုင်နေသူ အတူနေသားငယ်ဖြစ်သူ ၀င်းရွှေ၏ ရင်ဘတ်ကို ၀ါးလုံးပိုင်းဖြင့်(၁)ချက်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်း၊ ပြီးနောက်စန်းမောင်
မှာ နေအိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားပြီး လမ်းမပေါ်မှနေ၍ ၀င်းရွှေအား စိန်ခေါ်နေခဲ့ကြောင်း၊ ၀င်းရွှေမှာရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသဖြင့် ၀ဲဘက်
ရင်အုံ၌ ဖူးရောင်ဒဏ်ရာရရှိကာ သတိမရဖြစ်နေပြီးနောက်
သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း၊ သားဖြစ်သူများဖြစ်ကြသည့် စန်းမောင်နှင့်
၀င်းရွှေတို့မှာ ၅.၅.၂၀၁၄ ရက်နေ့က နေအိမ်ရှေ့လမ်းမပေါ်တွင် အရက်မူးကာစကားများကြစဉ် ၀င်းရွှေမှ စန်းမောင်အားလက်သီးဖြင့်
ထိုးခဲ့သည့်ကိစ္စအပေါ် စန်းမောင်မှမကျေနပ်ဖြစ်ကာ ယခုကဲ့သို့
ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် စန်းမောင်အား အရေးယူပေးပါရန် တိုင်တန်းလာခဲ့ပါသည်။
တိုင်တန်းချက်အရ တက်သစ်နယ်မြေရဲစခန်း (ပ)၇၀/၂၀၁၄၊
ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့်အမှုဖွင့်ကာ စန်းမောင်၊ (၄၀)နှစ်၊
ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ မီးလေပွေ ဖြစ်ပေါ်မှုကို အမိအရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Ohio ပြည်နယ်၊ Chillicothe မြို့ မှာ မီးလေပွေတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်တိုက်ခတ်နေပုံကို Instagram အသုံးပြုသူတစ်ဦးက အမိအရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပြီး တင်ခဲ့တာပါ။
လယ်သမားတစ်ယောက်ဟာ သူရဲ့လယ်ယာမြေကို မီးရှို့ နေတုန်း လေပွေတစ်ခု တိုက်ခတ်ပြီး အခုလို မီးလေဆင်နှာမောင်း တစ်ခုအဖြစ် အသွင်ပြောင်းသွားခဲ့တာပါ။
“ သူ့ အသံနဲ့ အပူချိန်က အရမ်းပြင်းထန်ပြီး ကြောက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါက အချိန်တော်တော်ကြာရှိနေမယ် ထင်ပေမယ့် မိနစ်အနည်းငယ်ပဲကြာပြီး ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာပါ”
ဒီပုံကို The Weather Channel အစီအစဉ်က သူ့ ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ ပြန်လည်ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဒီအပတ်အတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အပူချိန် စံချိန်တင်မြင့်တက်လာမှုနဲ့ ဒီလို မီးလေဆင်နှာမောင်း တွေရဲ့ ရန်ကလည်း မေ့မထားသင့်တဲ့အကြောင့် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
မီးလေပွေတွေဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်း ရှင်းလင်းပြထားတဲ့ စာမျက်နှာတစ်ခုဆီလည်း The Weather Channel က လမ်းညွှန်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အရမ်းပြင်းထန်တဲ့ တောမီးလောင်ကျွမ်းမှု အရှိန်မြင့်လာရကနေ အခုလို အရှိန်နဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ လေပွေတွေ ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ လေရဲ့ လည်ပတ်မှုအရှိန်က တစ်စုတစ်စည်းတည်း မီးလျှံရှိရာကို တိုးဝင်ပြီး မီးညွန့်တွေကို အပေါ်တက်စေကာ အခုလို မီးလေပွေတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို မိုးလေ၀သပညာရှင် Jon Erdman က ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီမီးလေပွေတွေဟာ အရမ်းကျဉ်းမြောင်းပေမယ့် အမြင့်ပေ ၁၀၀ လောက်အထိ မြင့်တက်ပြီး အန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်း သတိပေးထားပါတယ်။
ငွေကျပ် (၁၈၄၂)သိန်းခန့် တန်ဖိုးရှိ လက်ဝတ်ရတနာများနှင့် ငွေများ ခိုးယူခံရသည့်အမှုအား ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးရမိ
၂၆.၃.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၂၄၀၀အချိန်ခန့်တွင် စမ်းချောင်းမြို့နယ်နေ
ရတနာကုန်သည် ဒေါ်နွယ်နွယ်ဦးသည် နေအိမ်အပေါ်ထပ်တွင် ရတနာပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးပြီး
ဒီကနေ့ ဂျစ်တူးအကိုရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် စင်္ကာပူကိုရောက်လာခဲ့ ပါတယ်။အပျော်ထွက်-ဈေးဝယ်လာ တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
သူမရဲ့ ချစ်ဆုံးယောက်ျားဆုံးသွားလို့ အပူနဲ့ လာခဲ့ ရသူပါ။
လက်ထပ်ထားတာမှတစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးပါဘူးတဲ့ ။သူကကျောင်းဆရာမဆိုတော့ခွင့်ယူဖို့ အလုပ်ထွက်ဖို့ ဆိုတာတော်တော်ခက်လို
ယောက်ျားကလည်း သူမနှင့်အတူလိုက်မနေနိုင်ဆိုတော့ မယ် တစ်ရွာမောင်တစ်မြို့ အနေဝေးနေကြတာပေါ့။
နောက်နှစ်ဆိုရင် တော့အတူတူနေလို့ ရပါပြီ။(ဒီလိုအတွေးကလေးတွေနဲ့ ဆရာမလေးတစ်ယောက်ပျော်နေခဲ့တာပေါ့)
ဆရာမလေးယောက်ျားတစ်ယောက်မြန်မာနိုင်ငံထုတ်အကြောဖြေဆေးနဲ့ ပက်စီသောက်မိလို့ သေဆုံးသွား ပါတယ်။မနက်ဖြန်ဆိုရက်လည်နေ့ ပေါ့။
ပြီးခဲ့တဲ့သုံးပတ်လောက်ကလည်းပါတာစီတစ်မော့နဲ့ကိုကာကိုလာသောက်မိလို့ သေသွားတဲ့ မြန်မာအမျိုးသား တစ်ယောက်လည်းဆုံး ပါးသွားပါပြီ။
သူ့ခေါင်းတွေကိုက်လွန်းလို့ ပါတာစိတစ်မော့ကိုသောက်တယ် တဲ့(ဆေးရက်စွဲမကုန်သေးပါဘူး) နဲနဲကြာတော့ရင်တွေပူ လွန်းလို
့ဆေးရုံကိုပို့လိုက်ရပါတယ် အဲဒီဆေးရုံသွားတဲ့လမ်းမှာ ဘဲအသက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
အရင်ဆုံးကြားရတဲ့သတင်းကတော့ ဂျစ်တူးတို့သူငယ်ချင်းအ ရင်းခေါက်ခေါက်ကိုယ်တိုင်ပါဘဲ။
မြန်မာနိုင်ငံထုတ်ညော်ထွက်တဲ့ဆေးတစ်မျိုးကိုသောက်ပြီးတော်တော်ကလေးကြာမှပက်စီကိုသောက်လိုက်တာ တခါတည်းအသက် ပါ ပါသွားလိုက်တာပါ။
အထက်ပါအကြောင်းအရာတွေကိုပါ။မဖြစ်အောင်တားလို့ ရပါတယ်။တစ်ယောက်ကြည့်လို့ တစ်ယောက်သိ ရင်တစ်ယောက်အသက် ကိုကယ်တင်ရာရောက်ပါတယ်။
ဘလော့တွေအားလုံးကဖြစ်ဖြစ် – ပြန့်ပွားအောင်
ခြေစွယ်ငုပ်နာဆိုတာလူတိုင်းလိုလိုနဲ့ မစိမ်းတဲ့ဝေဒနာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီဝေဒနာဟာ ရိုးမလိုနဲ့ ဆန်းတတ်ပါတယ်။ သမားရိုးကျပဲဆိုပြီးပေါ့ဆထားလို့မရတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်ပါ။ ခြေစွယ်ငုပ်နာ(Ingrown Nail) က
သမ္မတအိုဘားမား၏ သမီးများ စီးနင်းလာသည့် ယာဉ်တန်း အား နောက်ယောင်ခံသည့် ယာဉ်မောင်းအား ဖမ်းမိ
၀ါရှင်တန် မေ ၇
ယမန်နေ့က အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ ဘားရတ်အိုဘားမား၏ သမီးနှစ်ဦးကို တင်ဆောင်လာသော ယာဉ်တန်းကို ကားတစ်စင်း ကနေ နောက်ယောင်ခံလိုက်သည့်အတွက်
ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းရွှေဂုံတိုင် ခုံးကျော်တံတားအဆင်း ဟာမစ်တစ်မှတ်တိုင်အနီးတွင် Probox(ပရိုဘောက်) အမျိုးအစားခဲရောင် ကုမ္ပဏီပိုင် ကားတစ်စီး
ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ် ၀မ်ဖွီးကျေးရွာအုပ်စု နှင့် စုံလောကျေးရွာအုပ်စု တို့တွင် မေလ (၄) ရက်နေ့ က ပြောင်းဖူးခြံအတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲ မှု (၂)ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲ မှုသည် ၀မ်ဖွီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ၀မ်ဖွီးကျေးရွာ SSNA (ခွဲထွက်) မိုင်းယွန်း တပ်စခန်း ဟောင်းအနီး ပြောင်းဖူး စိုက်တောင်သူ များက ပြောင်းခြံအတွင်း အလုပ်လုပ်နေစဉ် မေလ(၄)ရက်နေ့ နံနက် (၁၁)နာရီ အချိန်တွင် ဗုံးဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သော အလုံးတစ်လုံးကို တွေ့သဖြင့် အိုက်ဂီး အသက်(၁၄)နှစ် အရွယ် ပလောင် တိုင်းရင်းသား တစ်ဦးက ဓါးဖြင့် ခုတ်လိုက်ရာ ပေါက်ကွဲသွားသဖြင့် အိုက်ဂီး မှာ ခြေသလုံးတွင် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါသည်။ အလားတူစွာ စုံလောကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ့်မော်ပျဉ်ကျေးရွာ တွင်လည်း မေလ(၄)ရက်နေ့ ၊ နံနက် (၁၁း၄၀) အချိန်တွင် ပြောင်းဖူးခြံအတွင်း မြေပေါက်နေသော ပလောင်တိုင်းရင်းသူ အေးခမ်း နှင့် အေးဆီ တို့က ဗုံးဟုခေါ်ဆိုနိုင်သော အလုံးတစ်လုံးကို ပေါက်ပြားဖြင့် ပေါက်မိသဖြင့် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာ (၂)ဦးလုံး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ဒဏ်ရာ ရသူ (၃)ဦး အား မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပြီး ဆေးကုသမျှ များခံ ယူလျှက် ရှိပါသည်။ ဒဏ်ရာရသူ (၃)ဦး စလုံး စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေမရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
လန်ဒန်ရဲ့ Wembley အားကစားကွင်းမှာ ပထမဆုံးဖျော်ဖြေရမယ့် ရပ်ပ်ပါ Eminem ဖြစ်လာ
သီဟနိုင် on 2014-05-07 11:59
Eminemက သမိုင်းတွင်အောင် လုပ်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ လန်ဒန်ရဲ့ Wembley အားကစားကွင်းမှာ Eminem ဟာ ပထမဆုံး ဖျော်ဖြေရမယ့် ရပ်ပ်ပါ ဖြစ်လာပါတယ်။ The Beatles, Pink Floyd နဲ့ The Rolling Stones တို့လည်း ပါဝင်သီဆိုကြမယ့် ကျော်ကြားလှတဲ့ ပွဲကြီးပါ။
ဒီရှိုးပွဲကြီးဟာ ဟစ်ပ်ဟော့ပ်အတွက် အောင်နိုင်မှုကြီးဖြစ်သလို၊ Eminem အတွက် ဧရာမ အောင်မြင်မှုကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန် အာဏာရှင်တွေက Eminem ကို လန်းန်မှာ ဂီတပွဲအကြီးကြီး မလုပ်စေချင်ခဲ့ကြပါဘူး။ Eminemဟာ Hyde Park မှာ ဖျော်ဖြေဖို့ အစပိုင်းမှာ လျာထားခဲ့ပေမယ့် အတည်ပြုချက်တော့ မရခဲ့ပါဘူး။
“Hyde Parkမှာ ဖျော်ဖြေဖို့ ထောက်ခံချက်မရနိုင်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ကြားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီနှစ်နွေရာသီ၊ လန်ဒန်မှာ ဖျော်ဖြေဖို့ကို ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားသွားတာပေါ့။ ကျွန်တော့်ကို တစ်ခုခုလုပ်စေဖို့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းက ကျွန်တော် မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောခံရတာပဲ။” လို့ Eminem ကပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Wembley အားကစားကွင်းက တခြား ရပ်ပ်ပါတွေကိုရော တံခါးဖွင့်ပေးမှာလား။ အချိန်ကပဲ ပြောပြသွားပါလိမ့်မယ်။
မေလ ၉ရက်နေ့မှာ လက်မှတ်တွေကို ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လ ၁၁ရက်မှာ ဂီတပွဲကြီးကို ကျင်းပသွားမှာပါ။
အတွဲ (၁၃)၊ အမှတ်(၉)
ရှစ်ပေပတ်လည်အခန်းကျဉ်းလေးထဲက ဂျပန်ထုတ်အပ်ချုပ်စက်ပေါ်မှာ အင်္ကျီကော်လာစတစ်ကို သေသပ်စွာ ချုပ်လုပ်နေသူတစ်ဦး။ ပူပြင်းလွန်းသော ရာသီကြောင့် မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးတွင် ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကအပြည့်။ သို့သော် အထည်စကို အနုပညာမြောက်စွာ ပုံဖော်နေသည့် သူ့လက်များ။ စက်နင်းနေသည့် ခြေထောက်များက စည်းချက်ညီညီ လှုပ်ရှားသက်ဝင်နေသည်။
သူကား စက်ချုပ်ဆရာ ဦးမောင်အေးပင်။ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံနှင့် စစ်ယူနီဖောင်းများ ချုပ်ရာတွင် မြန်မာပြည်ရှိ နာမည်ကျော်စက်ချုပ်ဆရာများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် အစိုးရ၀န်ကြီးများအတွက် အနောက်တိုင်းဝတ်စုံများကို တာဝန်ယူချုပ်လုပ်ပေးလျက်ရှိသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်က ဖက်ရှင်ပဲလေ့စ်အပ်ချုပ်ဆိုင်တွင် ပိတ်စနှင့် ကိုယ်တိုင်းတို့ကိုပေး၍ ပုံမှန်အပ်နှံလေ့ရှိပြီး ထိုဆိုင်က ဦးမောင်အေးလို ပညာရှင်ကို လခပေး၍ တစ်ဆင့်ပြန်လည်အပ်နှံလေ့ရှိသည်။
‘‘သမ္မတကို တစ်ခါမှ ကိုယ်တိုင်မတိုင်းဖူးဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့အတွက်ချုပ်ရတာများတော့ သူ့ကိုယ်တိုင်းကို အလွတ်တောင်ရနေပြီ။ အခုနောက်ဆုံး ဂျပန်သွားတုန်းက အနောက်တိုင်းဝတ်စုံနှစ်စုံ ချုပ်ပေးထားတယ်’’ဟု သမ္မတ၏ကိုယ်တိုင်းကို နှုတ်ကအလွတ်ရွတ်ပြရင်း ဦးမောင်အေးကပြောသည်။
ဖက်ရှင်ပဲလေ့စ်က ဦးမောင်အေးထံ အပ်နှံချုပ်လုပ်စေသလို သမ္မတအား စပွန်ဆာပေးချင်သူများ လာအပ်ကြသည်များလည်းရှိသည်။
‘‘သမ္မတကိုယ်တိုင်းကို သိနေတော့ သမ္မတကို ကန်တော့ချင်တဲ့သူတွေက ချုပ်ပေးဖို့ လာအပ်တာလည်း ရှိပါတယ်’’ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက် ဖက်ရှင်ပဲလေ့စ်ဆိုင်တွင် လက်ခစားဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့စဉ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်၊ ဗိုလ်ချုပ်စောမောင် အပါအ၀င် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအတွက် ယူနီဖောင်းဝတ်စုံများစွာ ချုပ်ပေးခဲ့ရသည်။
စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအတွက် ၀တ်စုံချုပ်ရာတွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အမှတ်တရအဖြစ်အပျက်များကို သူကပြန်ပြောင်းပြောပြသည်။
‘‘သူတို့ PSO တွေက မှာတာပဲလုပ်။ ဘာစကားမှမပြောနဲ့ဆိုပြီး ပြောခွင့်လည်းမပေးဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို ကုိုယ်တိုင်းတိုင်းနေချိန်မှာ စိတ်ပူတာ၊ စိုးရိမ်တာတော့မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့်ပညာ ကျွန်တော်ယုံတယ်’’ဟု ယခု Right2အမည်ဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အပ်ချုပ်ဆိုင်ကို အင်းစိန်ရွာမတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဦးမောင်အေးက ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်ပြောသည်။
ထိုသို့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ အ၀တ်အစားများကို ဖန်တီးချုပ်လုပ်ပေးနေသော သာကေတသား ဦးမောင်အေးမှာ ငယ်စဉ်က ဖခင်၏ လက်ငုတ်လက်ရင်းဖြစ်သော စက်ချုပ်အလုပ်ကို လုံးဝစိတ်မ၀င်စားပေ။ ကလေးသဘာဝ လည်ရင်းပတ်ရင်း ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းသည့်အိမ်ကို ၀င်ထွက်သွားလာမိရာမှ ဆေးခြောက်လာဝယ်သော လူမိုက်ကြီးများနှင့် ပေါင်းသင်းမိသည်။
အရွယ်နှင့်မလိုက် ဆေးခြောက်အသယ်အပို့လုပ်ခြင်းဖြင့် ငွေလေးငါးခြောက်ကျပ် လွယ်လွယ်ကူကူရသည့်ဘ၀ကို သာယာခဲ့သည်။ လွယ်လွယ်ရ၊ လွယ်လွယ်ဖြုန်းရင်းက ရန်ကုန်ခါးပိုက်နှိုက်လောကတွင်လည်း ကျင်လည်ခဲ့သည်။
၁၉၈၀ မှ ၈၈ ကာလအထိ ခါးပိုက်နှိုက်လောကတွင် ‘‘ကုလားမဟေ့’’ဆိုလျှင် မသိသူမရှိ။ ရန်ကုန်ကို ဒီလိုခါးစောင်းတင်ခဲ့သော မောင်အေးဖြစ်သည်။
ခါးပိုက်နှိုက်ဆရာတစ်ဆူဖြစ်သော်လည်း တစ်ခါမှ ခါးပိုက်နှိုက်မှုဖြင့် ထောင်မကျ။ ခိုးမှု၊ မသင်္ကာမှု၊ လူရိုက်မှုတို့ဖြင့်သာ ထောင်ကျခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းအပြီးတွင် ဆရာတော်ဦးဝိမာလနှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမများ၊ တရားတော်များကို ယုံကြည်သက်ဝင်လိုက်စားလာကာ ခါးလောကကို အပြီးတိုင်စွန့်လွှတ်၍ စက်ချုပ်ဆရာဘ၀ကိုသာ ယတိပြတ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
သူချုပ်ပေးလိုက်သော ၀တ်စုံများကို အကြီးအကဲများက တစ်ခါမှ Complain မတက်ခဲ့ဖူးပေ။ သုိ့သော် မောင်အေးထံ အပ်နေရာမှ အခြားလူကို စက်ဆိုင်ကြီးများက ပြောင်းအပ်လျှင်တော့ ပြဿနာတက်တတ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
‘‘စက်ဆရာပြောင်းတာနဲ့ လူကြီးတွေက ချက်ချင်းသိတယ်။ ဘောင်းဘီက ထိုင်လိုက်တာနဲ့ ဖိနပ်အပေါ်တက်လာပြီး ခြေစွပ်ပေါ်လာတာတို့၊ ထိုင်ခါနီး ဘောင်းဘီဆွဲတင်ရတာတို့ ဖြစ်တာပေါ့။
ကိုယ်ချုပ်ပေးထားတဲ့ သမ္မတတို့၊ ၀န်ကြီးဦးအုန်းမြင့်တို့၊ ဦးမြင့်လှိုင်တို့ဆို တီဗီမှာတွေ့ရင် တစ်ချိန်လုံးဂရုစိုက်ကြည့်တယ်။ ကိုယ်ချုပ်ပေးတာကို သူတို့ဝတ်ထားတာ ဘယ်နေရာလိုအပ်နေလဲ။ နောက်တစ်ခါ ဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်ချုပ်မလဲ အမြဲလေ့လာတယ်’’
သူ့လက်ရာကို လူကြိုက်များရခြင်းက ဂျပန်နည်းဖြင့် ပိတ်စညှပ်ခြင်း(Cutting)ပိုင်း ကျွမ်းကျင်၍ ဖြစ်သည်။ Cutting ကျွမ်းကျင်သပ်ရပ်မှုကြောင့် သူချုပ်သည့် အနောက်တိုင်းဝတ်စုံများမှာ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် အမြဲသပ်ရပ်စမတ်ကျနေတတ်သည်။
စက်ဆရာဘ၀အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးက ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း ၃၆ လမ်းထိပ်က အခမီးအပ်ချုပ်ဆိုင်တွင် အနောက်တိုင်းဝတ်စုံ လာအပ်သည်။ ထိုစဉ်က မောင်အေးမှာ အခမီး၏ လက်ခစားစက်ချုပ်သမား။ ညနေမှလာအပ်သည့်ဝတ်စုံကို မနက်ဖြန်မနက် ၇ နာရီယူမည်ဆို၍ တစ်ညလုံးမအိပ်ဘဲ ချုပ်ပေးခဲ့ရသည်။
‘‘မနက်ခြောက်ခွဲမှာ အင်ဒိုသမ္မတက လာဝတ်ကြည့်တယ်။ ကြိုက်လို့ Tailor ခေါ်ပါဆိုပြီး အဲဒီတုန်းက ဒေါ်လာတစ်ရာ မုန့်ဖိုးပေးသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က လက်ခစားဆိုတော့ အဲဒီပိုက်ဆံ ဆိုင်ရှင်ပဲယူထားတယ်’’
သူချုပ်ပေးရသူထဲတွင် မင်းသားနေအောင်၊ လွင်မိုး၊ အဆိုတော်ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ မျိုးကြီးတို့လို အနုပညာသမားများလည်း ပါဝင်သည်။
‘‘၁၉၈၄ မှာရိုက်တဲ့ မီလာရှီကာစိုင်းဗေဒါတစ်ကားလုံး နေအောင်ဝတ်တဲ့အ၀တ်အစားတွေ ကျွန်တော်ချုပ်ပေးခဲ့တာပေါ့’’ဟု ဆိုသည်။
ထိတ်ထိတ်ကြဲလူကြီးပိုင်းနှင့် နာမည်ကျော်များအတွက် ၀တ်စုံချုပ်လုပ်ပေးရသော ဦးမောင်အေးတွင် ငွေကြေးဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုက သိပ်များများစားစားမရှိ၊ နာမည်ကြီးဆိုင်ကြီးတွေကဲ့သို့ ငွေသိန်းထောင်ပေါင်းများစွာ မရင်းနှီးနိုင်၍ မောင်အေးအပါအ၀င် စက်ဆရာပညာရှင်အချို့ ယခုထိဆိုင်ကြီးတွေ၏ လက်ဝေခံအလုပ်သမားအဆင့်ကနေ မတက်နိုင်သေး။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက သရဲ ခေါ်တယ်ဆိုတာ ခေတ်စားပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလို သရဲ ခေါ်ဖို့ ဆိုတာ လူတိုင်း မလုပ်တတ်ပါဘူး။ သရဲ ခေါ်ပုံခေါ်နည်း၊ မေးပုံမေးနည်း၊ အထာကောက်နည်း၊ ပြန်လွှတ်နည်း ဒါတွေ မျိုးစုံရှိပါတယ်..။ ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ကတော့ ဂါဏာတစ်ခုလည်း ရွှတ်ရတယ် ထင်ပါတယ်..။ ကျွန်တော့်အသက် (၁၃) နှစ်အရွယ်လောက်မှာပဲ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ပထမဦးဆုံး သရဲခေါ်တာကို စတင်ကြုံဖူးပါတော့တယ်…။
ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်ထဲကို မုံရွာက မိသားစုတစ်စုပြောင်းလာပါတယ်..။ အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ပြီး သဘောကောင်းတဲ့ မိသားစုပါ..။ သူတို့မိသားစုထဲမှာ ကျွန်တော့်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါပြီး မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်..။ သူတို့မိသားစုမှာ ထူးခြားမှု တစ်ခုက သူတို့ဟာ ညတိုင်း (၉း၀၀) နာရီလောက်ရောက်ပြီဆို ဖက်တစ်ခုထဲကို ထမင်းတွေ၊ ဟင်းတွေထည့်ပြီး လမ်းဆုံ လမ်းလေးခွမှာ ချပြီး ဖရောင်းတိုင်တွေ အမွှေးတိုင်တွေနဲ့ ပူဇော်ပါတယ်..။ ကျွန်တော် အစက ထင်တာက သူတို့ နတ်တွေကို ပူဇော်တယ် ထင်နေတာပါ…။ နောက်ပိုင်းမှ သူငယ်ချင်းက အဲ့ဒီလို လုပ်တာဟာ နာနာဘာဝတွေကို အစားအစာကျွေးတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ နာနာဘာဝ အများစုဟာ လမ်းဆုံလမ်းလေးခွမှာ နေကြတာများကြောင်း ပြောပြပါတယ်..။ သူက အဲ့ဒီ နာနာဘာဝတွေခေါ်ပြီး သိချင်တာတွေ မေးလို့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့ ကျွန်တော် တော်တော်ကို အံ့သြသွားခဲ့ရပါတယ်..။ ကျွန်တော်က မယုံဘူးဆိုတော့ သူကလက်တွေ့ပြမယ်လို့ပြောပါတယ်..။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း သူငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြတော့ သူတို့လည်း စိတ်ဝင်စားကြတာနဲ့ တစ်ရက်မှာ အဲ့ဒီကိစ္စကို ကြည့်ကြဖို့ အတွက် တိုင်ပင်လိုက်ကြပါတယ်..။
ကျွန်တော်တို့ ည (၁၁း၄၀) မိနစ်လောက်မှာ ကျွန်တော်ရယ် အခြား ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်ရယ် ကျွန်တော့်အိမ်ကနေပဲလူစုပြီး ထွက်လာကြပါတယ်..။ အိမ်ကလူကြီးတွေ ခရီးထွက်နေတာကြောင့်လည်း ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်..။ ဒီလိုနဲ့ မုံရွာသူငယ်ချင်းအိမ်မှာ သူ့ကိုဝင်ခေါ်ပါတယ်..။ သူလည်း ကျွန်တော့်ကို စောင့်နေပုံပါပဲ..။ ချက်ချင်းပဲ အိမ်ထဲကနေ ထွက်လာပါတယ်..။ သူတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး..၊ သူ့ဦးလေးလည်း ပါလာပါတယ်…။ သူက ဒီကိစ္စကို သိပ်မကျွမ်းသေးတာကြောင့် အမှားအယွင်း တစ်ခုခု မရှိရအောင် ဦးလေး ဖြစ်သူကို အကူအညီတောင်းထားကြောင်း ပြောပြပါတယ်..။ ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ လက်ထဲမှာတော့ အမဲသား တစ်ဆွဲရယ်..၊ ခြေထောက်လေးချောင်းပါ ခုံရှည်တစ်လုံး ကိုင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ သရဲခေါ်ဖို့အတွက် လမ်းဆုံကို ဆက်လက် ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတော့တယ်..။
လမ်းဆုံကိုရောက်တော့ ည (၁၂း၁၀) မိနစ်ရှိပါပြီ။ ထုံးအတိုင်း လမ်းဆုံမှာ သူတို့ပူဇော်ထားတဲ့ ဖက်ထဲက ထမင်း၊ဟင်းရယ်..၊ မီးငြိမ်းပြီး ကုန်ဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့ ဖရောင်းတိုင်နဲ့ အမွှေးတိုင် အကြွင်းအကျန် တွေ ကိုတွေ့ရပါတယ်..။ ဦးလေးက လမ်းဆုံ အလယ်တည့်တည်မှာ သူ့ဖိနပ်ကို ချွတ်လိုက်ပါတယ်..။ ပြီးတော့ ဖိနပ်တစ်ဖက်ကို မှောက်လိုက်ပါတယ်..။ ဖိနပ်နှစ်ဖက်ပေါ်မှာ ထိုင်ခုံရှည်က မျက်နှာချင်းဆိုင် ခြေထောက် နှစ်ချောင်း ကိုတင်ပါတယ်..။ ကျန်တဲ့ ထိုင်ခုံခြေထောက် နှစ်ချောင်းကိုတော့ လွှတ်ထားပါတယ်..။
ပြီးတော့ အမဲသားဆွဲကို ခုံပေါ်တင်ပါတယ်..။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူ ခုံပေါ်မှာ သူတို့ လက်တွေတင်ပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေအထားနဲ့ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ပါတယ်..။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ လက်တွေကို လက်မချင်း၊ လက်သန်းချင်း ထိဆက်ပြီး စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်မျိုးလုပ်လိုက်ပါတယ်..။ ပြီးတော့ ရှေ့မှာ ပိတ်ပြီး ရပ်ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ဖယ်ခိုင်းပါတယ်..။ သရဲ စခေါ်ပါတော့မယ်..။ ကျွန်တော့်တစ် သက် တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ အထူးအဆန်းဆုံး ကိစ္စကြီးကို လက်တွေ့မြင်ရတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်လှုပ်ရှား မိသလို ကြောက်လည်း ကြောက်နေမိပါတယ်..။
အရင်ဆုံး ပါဠိစကားတွေပါတဲ့ ဂါဏာကို ဦးလေးကြီးက အရင်ရွှတ်ပါတယ်..။ ၂ မိနစ်လောက်ကြာပါတယ်..။
ပြီးတော့ " ဒီလမ်းဆုံလမ်းလေးခွရဲ့ အရှေ့အရပ်မှာ ရှိကြတဲ့..၊ နာနာဘာဝများ ..၊ ဒီခုံလေးမှာ ၀င်ရောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်..၊ ဆော့ကစား ပြီးရင်တော့ ခုံပေါ်က အမဲသားကို ကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဆော့ကစားမယ်ဆိုရင် ခုံကို လှုပ်ပြပါ " လို့ပြောပြီး သူတို့လက်တွေကို ခုံနဲ့ ၆ လက်မ လောက်ကွာအောင် မြှောက်လိုက်ပါတယ်..။ ပြီးတော့ စက်ဝန်းပုံသဏ္ဍာန် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ သူတို့ လက်တွေကို တစ်ဝက်လောက်ဟ ပေးလိုက်ပါတယ်..။ ၁၀ စက္ကန့်လောက်ပဲ ကြာပါတယ်..။ လက်တွေနဲ့ ခြောက်လက်မ လောက် ကွာထားတဲ့ အဲ့ဒီခုံက ထူးဆန်းစွာပဲ လှုပ်လာပါတယ်..။ ခုံလှုပ်လာပြီဆိုတာနဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက်က ခုနက ဟထားတဲ့ လက်တွေကို ပြန်ချိတ်လိုက်ပြီး စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန် အနေအထားကို ပြန်ယူ လိုပါတယ်..။ အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ခုံထဲမှာ အခုဆိုရင် နာနာဘာဝတစ်ကောင် ၀င်ရောက်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
ကျန်တဲ့သူတွေစကားပြောလို့ မရပါဘူး..၊ ခုနက ပါဠိလို ဂါဏာရွတ်ထားတဲ့သူပဲ စကားပြောပြီး မေးမြန်းလို့ရပါတယ်..။ မေးမြန်းတဲ့နေရာမှလည်း ခုံထဲမှာ ၀င်နေတဲ့ နာနာဘာဝက စကားပြောလို့ မရတဲ့ အတွက် ခုံနဲ့ အချက်ပြပြီး အမေးအဖြေ ပြုလုပ်ရပါတယ်..။ မေးတဲ့သူ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဖြေ ပါတဲ့ မေးခွန်းမျိုး မေးပေးရပါတယ်..၊ (ဥပမာ …. သရဲက မိန်းမဆိုရင် ခုံကို တစ်ချက် လှုပ်ပြပါ..၊ ယောက်ျားဆိုရင် နှစ်ချက် လှုပ်ပြပါ…) ဆိုပြီး မေးရပါတယ်..။ ဒါဆို သရဲက မိန်းမဆိုရင် ခုံကို တစ်ချက်၊ ယောက်ျားဆိုရင် ခုံကို နှစ်ချက် လှုပ်ပြီး အလည်မှာ ခုံကို အလည်မှာ ပြန်ရပ်နေစေပါတယ်..။ ၀င်နေတာ ကလေးသရဲ ဆိုရင်တော့ ခုံကို လှုပ်ပြမှာ မဟုတ်ပဲ မေးတဲ့သူက ပြန်လည်ပြီး ကလေး ဆိုရင် ဘယ်နှစ်ချက်လှုပ်ပြပါ ဆိုပြီး မေးလို့ရပါတယ်..။ အရေအတွက် မေးခွန်းကိုတော့ ရိုးရိုးပဲ မေးလို့ရပါတယ်..။ ဥပမာ အသက် ဘယ်နှစ်နှစ်မှာ ဆုံးတာလဲ..၊ တစ်ချက်ကို တစ်နှစ်နှုန်းနဲ့ ဖြေပေးပါလို့ မေးရင် သူခုံလှုပ်ပြတဲ့ အချက်တွေကို မှတ်ထားလိုက်ရုံပါပဲ..။
ခုံလှုပ်ပြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ လက်တွေက ခုံနဲ့ ခြောက်လက်မ လောက် အကွာ လေထဲမှာ ထားထားတာပါ..။ ခုံရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ဖိနပ်တွေ ခုထားတဲ့ အတွက် ကျန်တဲ့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်က လွတ်နေပါတယ်..။ အခု အမေးအဖြေလုပ်နေတဲ့ ခုံလှုပ်ပြတယ်ဆိုတာက အဲ့ဒီခုံက လွတ်နေတဲ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကနေ ဟိုဖက်ဒီဖက် လှုပ်ပြတာကိုဆိုလိုတာပါ..။ တစ်ဖက်ကို တစ်ချက်နှုန်းနဲ့ ရေတွက်ရပါတယ်..။ သူ့အဖြေပြီးရင်တော့ ခုံဟာ ထူးဆန်းစွာပဲ လေထဲမှာ ညီညာစွာ ရပ်တန့် နေပါတယ်..။
ကဲ… ကျွန်တော်တို့ သရဲခေါ်တဲ့ အကြောင်း ပြန်ဆက်လိုက်ရအောင်ဗျာ…။ ခုနက ပြောပြတဲ့ အတိုင်း ၀င်လာတဲ့ သရဲကို ကျွန်တော်တို့ မေးလိုက်တာ.. သူက ၁၀ တန်းကျောင်းသူ၊ အသက် (၁၅) နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီနေမှာပဲ ကားနဲ့ တိုက်မိပြီး မကျွတ်မလွတ်ဖြစ်နေကြောင်း၊ ကျွန်တော်တို့နဲ့ တစ်ရပ်ကွက် အကျော်၊ ရပ်ကွက် (၁၁) ထဲက ( ..) လမ်းထဲက၊ အိမ်အမှတ် (.. ) မှာ နေထိုင်ကြောင်း၊ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အမေးအဖြေ လုပ်ရတာ ပျော်ကြောင်း သိရပါတယ်..။
ဒီလိုနဲ့ မေးပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာတော့ ဦးလေးက ဂါထာ တစ်ခုကို ရွတ်ပါတယ်..။ ပြီးတော့ "ငါတို့နဲ့ လာဆော့ကစားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ အခုသွားလိုရာ သွားနိုင်ပါပြီ..။ အမဲသားကို လမ်းဆုံရဲ့ ညာဖက်ထောင့်မှာ ထားခဲ့ပါမယ်…"ဆိုပြီး လက်ကို ပြန်ဟပေးလိုက်ပါတယ်..။ ခုံက အလည်မှာ ရပ်နေရာကနေ ချက်ချင်းပဲ သူ့နဂိုအနေအထားအတိုင်း ပြန်ရောက်သွားပါတယ်..။ သူရဲမလေး ထွက်သွားပါ ပြီ…။
ဦးလေးက အမဲသားကို လမ်းရဲ့ ညာဖက်ထောင့် မှာ ထားခဲ့ပြီး အိမ်ကို ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာ သူ့အတွေ့ အကြုံတွေကို ပြောပြပါတယ်..။ ဒီလိုမေးတဲ့နေရာမှာ မေးချိန်ကို (၁၅) မိနစ်သာ အများဆုံး ထားပြီး မေးရကြောင်း၊ ပြန်မလွှတ်ပဲ အချိန်အကြာကြီး ဆွဲထားရင် စိတ်ဆိုးပြီး မိမိတို့ထဲက လိပ်ပြာငယ် တဲ့ လူတစ်ယောက်ယောက်ကို ၀င်ပူးကြောင်း၊ အရေးအကြီးဆုံးအချက်က စသလို နောက်သလိုနဲ့ ဒီည ငါတို့ ထဲက ဘယ်သူနဲ့ လိုက်မှာလဲ..၊ ဘယ်သူ့ကို ခင်လဲ စတာတွေကို မမေးရပါဘူး..၊ ဒီမေးခွန်းမျိုးဟာ နာနာဘာဝတွေကို အိမ်ထဲလိုက်နိုင်ဖို့ ခွင့်ပြုချက်ပေး သလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်..။ သူတို့မုံရွာမှာ အဲ့ဒီလို သွားစမိလို့ သရဲဟာ ကောင်လေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဘေးကနေ လုံးဝကို မခွဲတော့ပဲ..၊ ကောင်လေးခမျာ အိပ်လည်း သူ့ပုံမြင်ရ..၊ စားလည်း သူ့ပုံမြင်ရနဲ့ နောက်ဆုံး ရူးသွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသွား ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ လုံးဝ မမေ့နိုင်စရာကောင်းတဲ့ ညတစ်ည ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
ဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်နေ့ နံနက် ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း (၄) ယောက် နိုးတာနဲ့ ချက်ချင်း သွားကြည့်ခဲ့တာ ကျွန်တော်တို့ ထားခဲ့တဲ့ အမဲသား ရှိ/မရှိ ဆိုတာကိုပါ..။ မရှိတော့ပါဘူး..။ ဒါကတော့ သရဲပဲ စားသွားတာလား..၊ လမ်းဘေးကခွေးပဲ ဆွဲတာလားဆိုတာကိုတော့ စဉ်းစားစရာပါပဲ..။
နောက်တစ်ခုက မနေ့ညက သိခဲ့တဲ့ လိပ်စာအတိုင်း ရပ်ကွက် (၁၁)၊ ( ..) လမ်းထဲကို သူငယ်ချင်း (၄) ယောက် သွားခဲ့ကြပါတယ်..။ အဲ့ဒီနံပါတ်နဲ့ အိမ်က အဆိုပါလမ်းထဲမှာ တစ်ကယ်ရှိပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ ညက သိခဲ့တဲ့ အိမ်နံပါတ်ကို လှမ်းမြင်လိုက်ရတော့ ကြက်သီး မွေးညှင်းတွေ ဖျင်းကနဲ ထသွားခဲ့ရပါတယ်..။
နောက်တစ်နေ့မှာ အဲ့ဒီအိမ်ကသူတွေနဲ့သိတဲ့ အခြား သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ အဲ့ဒီ အိမ်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်..။ တခြား အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ရောက်သွားခဲ့တာပါ..။ အိမ်ထဲမှာ ကျောင်းဝတ်စုံနဲ့ ဆုယူနေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပုံကို ချိတ်ဆွဲ ထားပါတယ်..။ ကျွန်တော် တော်တော်လေးကို လန့်နေပါပြီ..။ နောက်ဆုံး သိချင်စိတ်ကို လုံးဝ မအောင့်အီး နိုင်တာနဲ့ပဲ ကျွန်တော် အရှက်မဲ့စွာ "အန်တီ..၊ ဒီဓါတ်ပုံထဲက ဘယ်သူလဲမသိဘူးနော်..၊ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းနဲ့ အရမ်းဆင်လို့ပါ…" ဆိုပြီး မေးလိုက်ပါတယ်..။
"အဲ့ဒါ အန်တီ့ သမီးလေ..၊ သားသူငယ်ချင်းတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး..၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀ နှစ်လောက်က ကားတိုက်ပြီး ဆုံးသွားတာလေ…"
"ဗျာ…၊ ဟုတ်လား..၊ ဘယ်နေရာမှာ တိုက်တာလဲ အန်တီ…"
"ရပ်ကွက် (၁၀)၊ အ.ထ.က (၅) ဘေးနားက လမ်းဆုံမှာ…ကျောင်းသွားရင်း တိုက်မိတာ..."
သေချာပါတယ်...။ မနေ့က ကျွန်တော်တို့ မေးခဲ့တာ အဲ့ဒီလမ်းဆုံမှာပါပဲ..။ ကျွန်တော့်ပုံစံက အိနြေ္ဒမဆည်နိုင်ပဲ ဂယောင်ချောက်ချားတွေ ဖြစ်နေမှာ သေချာပါတယ်..။ ဒါဆို သူ့အသက်က အခုချိန်ဆို (၃၅) နှစ်လောက်တောင် ရှိနေမှာပေါ့….၊ ကျွန်တော် ဒီကိစ္စကို လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူးပဲ တွက် ထားတာပါ..။ ယုံလည်း မယုံချင်ပါဘူး..၊ မနေ့က ကျွန်တော်တို့နဲ့ အမေးအဖြေလုပ်ခဲ့တာ လှည့်ကွက်တစ်ခုလို့သာ ကျွန်တော် ထင်ထားတာပါ..။ ကျွန်တော် ခေါင်းနပန်းတွေ တော်တော်လေးကြီးသွားပါတယ်..။ ကျွန်တော် သူ့ဓါတ်ပုံကို ထပ် ကြည့်မိလိုက်တယ်..။ သူက ဓါတ်ပုံထဲကနေ ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုံစံပါပဲ..။ ကျွန်တော် အလောတကြီး နှုတ်ဆက်ပြီး အိမ်ကို အပြေးတပိုင်း ပြန်ခဲ့ရပါတော့တယ်..။